ထူးထူးခြားခြား ဝက်မကြီးမှ ဝက်၊ ဆင်၊ မျောက်ပုံတူ ဝက်မွေးဖွား
ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ရွာတော်ကျေးရွာ အုပ်စု ရွာတော်တောင်ရွာ အမှတ်(၁၈၃)နေ ဦးဝင်းညွန့် နေအိမ်တွင် ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီခွဲက ၎င်းအိမ်၌ မွေးမြူထားသော တစ်နှစ်သား အရွယ် ဝက်မတစ်ကောင်မှ ဝက်ပေါက် ကလေး သုံးကောင် မွေးဖွား ခဲ့သည်။
ထိုသို့ ဝက်ပေါက်ကလေး သုံးကောင် မွေးဖွားရာတွင် ဝက်မကလေး တစ်ကောင်မှာ သမားရိုးကျ မွေးဖွားခြင်း မဟုတ်ဘဲ ထူးထူးခြားခြား ဝက်၊ ဆင်၊ မျောက်ပုံတူ မွေးလာသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဝက်မကလေး၏ ထူးခြားချက်မှာ မျက်နှာသည် ဝက်နှင့် မတူဘဲ မျောက်မျက်နှာနှင့် တူနေပြီး မျက်နှာတွင် နှာခေါင်း ပါရှိခြင်း မရှိဘဲ အသက်ရှူရာတွင် ပါးစပ်ဖြင့်သာ အသက်ရှူနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် ပို၍ ထူးခြားသည်မှာ မျက်နှာတွင် မျက်လုံးတစ်လုံးတည်းသာ ပါရှိပြီး မျက်နှာရှိ နဖူးတည့်တည့်တွင် ဆင်များကဲ့သို့ နှာမောင်းပါရှိ သည် ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ယခုအခါ အဆိုပါ ဝက်မကလေးမှာ ကျန်းမာစွာဖြင့် အသက်ရှင်လျက် ရှိသည်။
ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင် ရေမြင်း အရှင်ပေါက်ဖွားခြင်း မရှိသည်မှာ ၁၈ နှစ် ကြာမြင့်ပြီးနောက် ရေမြင်းမ (အိပြာ) က သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်က ရေမြင်း တစ်ကောင် အရှင် မွေးဖွားနိုင်ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန် ဥယျာဉ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်ရွှေက The Voice သို့ ပြောကြား သည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် မိခင်ဖြစ်သူ အိပြာကို မွေးဖွားခြင်း ဖြစ်ပြီး အိပြာ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် အရောက်တွင် ရေမြင်း အရှင်တစ်ကောင် မွေး ဖွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အနားကပ်၍ မရသေး၍ ယခု မွေးဖွားသည့် အကောင် ကို အထီး၊ အမ မခွဲခြားရသေးကြောင်း ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန် ဥယျာဉ်မှ တိရစ္ဆာန် ဆေးကု ဆရာဝန် ဒေါက်တာ ထွန်းမြင့်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ရေမြင်းမ အိပြာ ယခု မွေးဖွားခြင်းသည် တတိယအကြိမ်မြောက် ဖြစ် ပြီး ပထမအကြိမ် မွေးဖွားသည့် ရေမြင်းမှာ တစ်ရက်သာ ရှင်သန်ခဲ့ကာ ဒုတိယ အကြိမ်တွင်လည်း ရေမြင်း အသေသာ မွေးဖွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“အခု နို့မတိုက်သေးတော့ စိတ်မချရသေးဘူး။ နို့ဦးရည် မရသေးတော့ စိတ်ပူနေရသေးတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန် ဥယျာဉ်တွင် ရေမြင်း ခြောက်ကောင်ရှိပြီး ရေမြင်းအမ ငါးကောင်ရှိကာ အထီး တစ်ကောင်သာ ရှိကြောင်း ဒေါက်တာ ထွန်းမြင့်က ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
“မျိုးစပ်ဖို့ အထီး ရှားနေတာပေါ့” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
သက်တမ်း နှစ် ၄၀ ရှိ ရေမြင်းများသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ရှစ်လခန့် ကြာမြင့်တတ်ပြီး အစာချေ အားကောင်းသည့်အတွက် တစ်ရက်လျှင် ပေါင် ၁၀၀ ခန့် စားကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ရေမြင်းမ (အိပြာ) ကို ဂျုံ၊ ဖွဲ၊ ကန်စွန်းရွက်၊ ကနဖော့၊ အာလူး၊ ငှက်ပျောသီး၊ ကန်စွန်းဥနှင့် လိုအပ်ချက်အရ ဆားနှစ်ကျပ်သား ခန့် ကျွေးကြောင်း ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန် ဥယျာဉ်ထံမှ သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တမူးမြို့တွင် သြဂုတ်လ၂၄ ရက်နေ့က အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ တရားမဝင် လာရောက်နေထိုင်သူများထံမှ လက်နက်များ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း တမူးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူး ခင်မောင်သော်က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
“လူတွေက ခမ်းပတ်ဘက်မှာမိလို့ အဲဒီမှာ လဝကအက်နဲ့ အမှုဖွင့်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုတော့ တမူးဘက်မှာမိလို့ တမူးရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ထားတယ်။ ဖမ်းမိတဲ့သူတွေက တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာ ဆက်ကြေးတောင်းပြီး နေကြတဲ့ ကူကီးချင်းလူမျိုး တပ်မတော်က လူတွေပါ” ဟု ဒုတိယရဲမှူးက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
တမူးခရိုင် ခမ်းပတ်မြို့နယ်ခွဲ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်ရှိ ဦးလွန်ဇကပ် (ခ) ပန်ကျား (၄၆) နှစ်၏ နေအိမ်သို့ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ညနေ ၅နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်က ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဖြစ်သော လမ်လ်ခန့်ခွာ (၂၅-နှစ်၊ ခင်ရန်ရွာ၊ ဆာနားပတီးမြို့နယ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ)၊ ပေါင်လင်းထန် (၂၄-နှစ်၊ မိုရေးမြို့၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ) နှင့် ရန်ရန်း (၃၁-နှစ်၊ ဖိုလ်ငိုတ်ရွာ၊ ချန်ဒယ်လ်ခရိုင်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ) တို့ကို တွေ့ရှိဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ကို လဝကအက်ဥပဒေပုဒ်မဖြင့် ခမ်းပတ်ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံအခြေစိုက် ကူကီးအမျိုးသားတပ်မတော် (Kuki National Army-KNA) မှ ခွဲထွက်လာသူများ ဖြစ်ပြီးပါလာသော ပစ္စတိုသေနတ်တစ်လက်နှင့် AK-47 သေနတ်တစ်လက်တို့ကို တမူးမြို့ မြို့မ (၁၄) ရပ်ကွက် ချောက်နက်ကြီးရွာတောစပ်ရှိ လူမနေသော တဲတစ်လုံးတွင် ဝှက်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသဖြင့် သွားရောက်ရှာဖွေရာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုလုပ် RUGER (၉ ဒသမ မမ ပစ္စတိုတစ်လက်) နံပါတ်မထင်ရှား၊ ကျည်ကတ်တစ်ခု၊ AK-47 သေနတ်တစ်လက် (နံပါတ်-၂၈၆၃၉)၊ ကျည်အိတ်တစ်ခု၊ (၇.၆၂ထ၃၉) ကျည် ၁၀ တောင့်တို့ကို သိမ်းဆည်း ရရှိခဲ့ကြောင်း တမူးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါအမှုအတွက် တမူးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းက (ပ) ၇၅/၂၀၁၃၊ လက်နက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ (က) ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း အဆိုပါ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့ကလည်း တမူးမြို့နယ်တရားရုံး စာရေးမတစ်ဦး၏ နေအိမ်တွင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက အပ်နှံထားသော ဗုံးသီး၊ နင်းမိုင်း၊ ကျည်မျိုးစုံနှင့် ကျည်အိမ်များ၊ ယမ်းတောင့်၊ ယမ်းကြိုးခွေစသော လက်နက်မျိုးစုံ ထည့်ထားသည့် သံသေတ္တာ ၁၀ လုံး တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင်လည်း တမူးမှ ကလေးသို့ ဆိုင်ကယ်အတွင်း ပစ္စတိုလက်နက် သယ်ဆောင်မောင်းနှင်လာသူတစ်ဦးကို ခမ်းပတ်မြို့နယ်ခွဲတွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း တမူးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ကြောင်ကလေး၏ အသက်ကို အရေးပေါ် ကယ်တင်ရန် ခွေးကလေးက သွေးလှူဒါန်းခဲ့
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၌ ကြောင်ချစ်သူများနှင့် ခွေးချစ်သူများ မတူညီသည့် သဘောထား အမြင်များအား ခေတ္တခဏ ဖယ်ရှားကာ ကြောင်ကလေး ၏ အသက်ကို ခွေးကလေးက ကယ်တင်ပေးခဲ့သည့် ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က ရိုရီဟု အမည်ရသည့် ရွှေဝါရောင် ကြောင်ကလေးသည် အဆိပ်ဖြူးထားသော ကြွက်သေတစ်ကောင်ကို စားမိကာ အဆိပ်သင့်ပြီး သေလုနီးနီး ခံစားနေရချိန်တွင် ကြောင်ပိုင်ရှင် ကင်အက်ဒ၀ပ်က တူရန်ဂါမြို့ရှိ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုခန်းသို့ ကသုတ်ကယက် အပြေးလာခဲ့ရသည်။ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် ကိတ်ဟယ်လာက ကြောင်ကလေးမှာ အလွန်ချိနဲ့ အားယုတ်နေပြီဖြစ်၍ အရေးပေါ် သွေးသွင်းမှသာ အသက်ရှင်သန်နိုင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကာ သွေးသွင်းရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် အရေးပေါ် အခြေအနေ ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်၍ သွေးအမျိုးအစားအား စစ်ဆေးရန် အလို့ငှာ ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ သွေးနမူနာပို့ဆောင်ရန် အချိန်ပင်မရတော့သည့် အတွက် ကင်၏ သူငယ်ချင်း မစ်ရှယ်ဝစ်မိုး ပိုင်ဆိုင်သော ခွေးကလေးထံမှ သွေးကိုရယူကာ ကြောင်ကလေး အသက်ရှင်လိုရှင်ငြား သွေးသွင်း ကုသပေးခဲ့သည်။ အရေးပေါ် အခြေအနေ ဖြစ်နေသည့် အတွက် တတ်နိုင်သျှ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ ပြီးနောက် ကံအားလျော်စွာပင် ကြောင်ကလေး၏ အသက်ကို အောင်မြင်စွာ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ခွေးကလေး၏ ပိုင်ရှင် ဗစ်ရှယ်က ၀မ်းသာအားရ ပြောကြားခဲ့သည်။ ယုံကြည်နိုင်ရန် အလွန်ပင် ခက်ခဲသော်လည်း ယခုအခါ ကြောင်ကလေးရိုရီမှာ တဖြည်းဖြည်း ပြန်လည် ကျန်းမာလာနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွမ်းကျင်သူတို့၏ အဆိုအရ ကြောင်ကလေးသည် ထိုခွေး၏သွေးကို နောက်တစ်ကြိမ် သွင်းမည် ဆိုလျှင်မူ သေဆုံးသွားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ပေ ၂၀၀၀ နက်သော ချောက်ထဲ ကားတစ်စီး ပြုတ်ကျသွားခဲ့သော်လည်း ကလေးတစ်ဦး အသက်ရှင်ကျန်ရစ်
ပီရူးနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း လာလီဘာတတ်ဒေသတွင် ပေ ၂၀၀၀ နီးပါးခန့် နက်သော ချောက်ထဲသို့ ကားတစ်စီး မတော်တဆ ပြုတ်ကျသွားခဲ့သော်လည်း အသက်လေးနှစ် အရွယ် မိန်းကလေးငယ် တစ်ဦး အသက်မသေဆုံးဘဲ တစ်ဦးတည်း ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း ပီရူးရဲတပ်ဖွဲ့က သြ ဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။ ကားပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသော ကလေးငယ်၏ မိဘနှစ်ဦးနှင့် ကားမောင်းသမား အပါအ၀င် ခရီးသည် ခြောက်ဦးစလုံး သေဆုံးသွားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ ကလေးငယ်၏ မိဘနှစ်ဦးစလုံးမှာ ပါတက်ဇ်ပြည်နယ်ရှိ အန်ဒါးစ်အဗေလီနိုကျောင်းမှ ကျောင်းဆရာများ ဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ သေဆုံးသွားသူ ခရီးသည်များ အားလုံး၏ ရုပ်အလောင်းများကို ချောက်ကမ်းပါး အောက်ခြေတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး အခင်းဖြစ်ပွားမှု အကြောင်းရင်းမှန်ကို သိရှိရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကနဦး စစ်ဆေးချက်များအရ ၎င်းတို့ စီးနင်းလာသော မော်တော်ယာဉ်က တစ်ဖက်မှ မျက်နှာချင်းဆိုင်လာသောကားအား လမ်းပေးရန် ကြိုးစားစဉ် ကမ်းပါးထက်မှ ချော်ကျသွားခြင်း ဟု အာဏာပိုင်အဖွဲ့များက ယာယီ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ၎င်းလမ်းပိုင်းသည် မြင့်မား၍ ကျဉ်းမြောင်းသော တောင်ကမ်းပါးလမ်း တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ယာဉ်မတော်တဆမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရှိ ငါးပိများ သံသယရှိက စစ်ဆေးနိုင်ပြီး ဓါတ်မြေသြဇာ မရောကြောင်း အခိုင်အမာ အာမခံ ဟု ငါးပိ လုပ်ငန်းရှင်များ ဆို
လမ်း၈၀ ၁၅လမ်း ၁၆လမ်းတွင်ခရီးသွားအမ်ျုးသမီးအားဒါးနှင့် ခုတ်နေစဉ်ရပ်ကွက်နေ ထီးရိုးဝင်း မောင်း ထေါင်ဝင်ပတ္တမြားဝင်းမှပြည်သူများ လိုက်လံဖမ်းဆီးစဉ် ၁၆လမ်း ၈၂လမ်းထေါင့်ရှိ လူငယ်တစ်ယောက် ကိုပါ ထပ်မံလည်ကုတ်ကိုအကြောင်းမဲ့ဝင်ခုတ်ရာ ပါးစောင်းခုတ်မိသွားပြီး မည်သို့မျှ ဝိုင်းဝန်းဖြောင့်ဖြ၍ မရသောကြောင့် အမှတ်၅ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲတပ်သားနှင့်အတုပြည်သူအများဝိုင်းနဘမ်းလုံးဖမ်းရာ ရဲတပ်သားမှာ မျက်နှာ နဖူး နှုတ်ခမ်းတို့တွင် လဲအကျမှာ ဓါးနှင့်မွန်းပြီး ဝါးရောင်းဝင်းလူငယ်များ မှ တုတ်နှင့်ရိုက် ၍ဖမ်းဆီး ခဲ့ကြ ကြောင်း လူနာများကို ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် ဝါးရောင်း ဝင်းလူငယ်ပရဟိတ အသင်းကားနှင့် အတု ရဲသား ရော ပြည်သူတစ်ဦး ကိုပါအရေးပေါ် ကားနှင့်မောင်းပို့ခဲရပါသည်။
ဓါးကိုင်သောင်းကြမ်းသူမှာ စိတ်အနည်းငယ် ယိုယွင်းနေပြီဒေသ အခေါ်ဝက်ကုန်းဆေး တုတ်ပီးဓါးပြီး ဆေးထိုးထါးသည်ဟုပြောကြပြီး ၄င်းမှာ ဦးခေါင်းမျက်နှာ တို့နှင့်ခြေထေါက်တွင်သွေးများနှင့် ပေကျံနေ သောလည်း မည်သိုမျှတုံလုပ်ခြင်းမရှိပါ။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ရွှေဘိုခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်တွင်း ထန်းကုန်းရွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှု ပဋိပက္ခနဲ့ဆက်နွယ်ပြီး မသင်္ကာလို့ ဖမ်းဆီးခံ ထားရသူတွေထဲက တစ်ဦး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ရွှေဘိုဆေးရုံကြီးမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထန်းကုန်းရဲစခန်းက ဝမ်းသွားလို့ သေဆုံးတာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ဗွီအိုအေကို အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးရုံမှာ အလောင်းကိုကြည့်ခွင့်ရခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ အားလုံးနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ မြင့်နိုင်ကတော့ ဒီအကြောင်းပြချက်အပေါ် သံသယရှိပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းထားတဲ့ မနန္ဒာချမ်း က ပြောပြပေးပါရှင်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကန့်ဘလူမြို့နယ် ထန်းကုန်းရွာမှာ စနေနေ့ညကဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှု ပဋိပက္ခနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ၁၁ ဦးထဲက ထန်းကုန်းဒေသခံ အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ် ဦးဆန်းချိုဟာ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က ရွှေဘိုဆေးရုံကြီးမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထန်းကုန်ရဲ စခန်းကို ဗွီအိုအေက ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာ-
“ဝမ်းလျှောပြီးတော့ သေတာပါ။ သူ့ဆွေမျိုးသားချင်း တွေလည်း အကုန်လုံးတွေ့ပါတယ်။ ဆေးရုံတက်တဲ့ အထိ။ ရွှေဘိုခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးကို မေးကြည့်လိုက်ပါ။”
ဒါကြောင့် ရွှေဘိုခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးကို ဆက်လက်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ မသိတဲ့အကြောင်း ဗွီအိုအေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ တခါ ရွှေဘိုဆေးရုံအုပ်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ စစ်ကိုင်း တိုင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်ကတော့ ဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ရွှေဘိုဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါ်သက်သက်စိန်နဲ့တွေ့ပါတယ်။ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ အကြောင်းစုံ ပြောပြတာက ၂၇ ရက်နေ့ည ၇ နာရီခွဲကျမှ တဲ့- အဖမ်းခံရပြီးကတည်းက ထောင်ကို ရောက်ပါတယ်တဲ့။ ည ၁၂ နာရီခွဲကျတော့ အခု သေသွားတဲ့ (ဦး)ဆန်းချိုဟာ ထပြီးတော့ ဆူပူလို့ တဲ့၊ သူနဲ့အတူတူနေတဲ့ နှစ်ယော ကို ဒိပြင်အခန်းထားပြီးတော့ (ဦး) ဆန်းချိုကို တစ်ယောက်တည်း ထားပါတယ်-တဲ့။ မနက်လေးနာရီ ကျတော့ သူဝမ်းသွားတယ်၊ ဝမ်းလျှောတယ်လို့ ပြောပါတယ်-တဲ့။ ဆလင်းနှစ်လုံး ထောင်က ပေးလိုက်တယ် လို့ ဆိုတယ်။ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါ်သက်သက်စိန်ပြောတာ။ ဆေးရုံကို ရောက်တော့ကျ မနက် ကိုးနာရီ ကျော်မှ ရောက်ပါတယ်-တဲ့။ ဆေးရုံရောက်တဲ့အချိန်မှာ သွေးက ၆၀ ပဲ တွေ့တယ်တဲ့။ လူမမာက သတိမရဘူး- တဲ့။ unconscious လို ဖြစ်နေတယ်-တဲ့။ အောက်စီဂျင်ပေးရတယ်-တဲ့။ ကျောမှာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေတော့ မတွေ့ပါဘူး-တဲ့။ လူနာကို သူတို့ ဦးခေါင်းကို ဓာတ်မှန်ရိုက်မကြည့်လိုက်ရဘူး-တဲ့။ ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်လို့ရှိရင် လူနာကိုရွှေ့လို့ရှိရင် သွေးပေါင်ကျပြီး တခုခု ဖြစ်မှာစိုးလို့-လို့ ဆိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးရုံမှာ သူတို့ treatment တွေ ပေးပါတယ်တဲ့။ ညနေ ၆ နာရီ ၅ မိနစ်မှာ ဆုံးပါတယ်-တဲ့။”
အာဏာပိုင်တွေဘက်က ဝမ်းသွားလို့ ဦးဆန်းချို သေဆုံးသွားတယ်လို့ အကြောင်းပြပေမဲ့ ဒီအပေါ် သံသယ ရှိပြီး ဆေးရုံရဲ့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေကိုလည်း စောင့်ဆိုင်းနေသလို ထောင်ပိုင်ကိုလည်း ဒီအဖြစ် အပျက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းခဲ့တဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားရေးစနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ပြော ပါတယ်။
“အခုနက ဆရာဝန်မကြီးပြောတာက အစာအိမ်ကို ဖွင့်စစ်တဲ့အချိန်မှာ သွေးယိုတာတွေ ဘာတွေ ဘာမှ မတွေ့ဘူး-တဲ့။ stool (၀မ်း) တို့ ဘာတို့တော့ ဓာတ်ခွဲခန်း ပို့ထားတယ်-တဲ့။ အခု ဦးဏှောက်ကိုလည်း ဖောက်ပြီးတော့ စစ်ထားတာရှိတယ်။ ဆေးစစ်ချက်တော့ ကျနော့်ကို ပေးမတွေ့ဘူး။ အဲဒါက ဒီလောက် ကလေးနဲ့ တရက် နှစ်ရက်ကလေးနဲ့ ၂၇ ရက်နေ့ ညမှာ ရောက်သွားပြီးတော့ မနက် လေးနာရီ ငါးနာရီ လောက်မှာ ဝမ်းလျှောတယ်လို့ ပြောပြီးတော့ ညနေကျတော့ ဒီဆေးရုံ ချက်ခြင်းပို့၊ သတိမရ ဘာမရ သေရတယ်ဆိုတာက ကျနော့်မှာ ယုံကြည်မှု ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ ကျနော် အလောင်းကိုကြည့်တော့ ပတ်ချာ လည်ကို ဖောက်ပြီးတော့ စစ်ထားတယ်။ အပေါ်ကလည်း အခု အခေါင်းကို ဖွင့်ပြယုံပဲပြတာ။ ပတ်ချာလည် ထုံးစံအတိုင်း လှန်ကြည့်လှောကြည့်ရင် ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘေးတွေကလည်း ညိုနေတယ်ထင်တာပဲ။ ဗိုက်ကလည်းဖွင့်ထားတယ်။ ထောင်ကို သွားတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ ထွက်မတွေ့ဘူး။ ခဏနေ နာရီဝက် လောက်နေမှ ထောင်ပိုင်က ခေါ်လို့ အထဲဝင်သွားတယ်။ သူက ဘာမှ မပြောဘဲနဲ့ အထက်ကို အစီရင်ခံစာ တက်ပါအုံးမယ်-တဲ့။ သူ ပင်စင်သွားခါနီး ထွက်တော့မှာမို့လို့ ပြုတ်မှာ ပြုမှာ ကြောက်ပါတယ်ဆိုပြီး ပြောနေ တာပေါ့ဗျာ။ အဲ သူတို့ တင်ကြတယ်။ Fax ထိုးတယ်။ ကျနော် ထိုင်စောင့်တယ်။ ဘယ်လိုမှ အကြောင်းပြန် မလာဘူး။ ကျနော် ပြန်မယ်လို့- ဘယ်မှာလဲ ဥပဒေရှိတာလဲ။ ဥပဒေမဲ့လုပ်တယ်။ ဒါ ကျနော်တို့ ပြောလို့မှ မရရင် ကျနော်တို့ ထပ်မံပြီးတော့ လုပ်သင့်တာကို လုပ်ရမှာပဲလေ။”
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ် ထန်းကုန်းရွာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတယောက်ကို မူဆလင် အမျိုးသား တယောက်က ကာဣနြေ္ဒပျက်ပြားအောင် ပြုလုပ်ပြီး အနိုင်ကျင့် စော်ကားရန် ကြိုးစားခဲ့ တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် စနေနေ့ညက ဒေသတွင်း အိုးအိမ်တွေနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာပါ။ ဒီလို လူအုပ်စုနဲ့ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးတာကြောင့် ထန်းကုန်းရွာက အိမ်ခြေ ၄၄ လုံး မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီး၊ ဈေးဆိုင် ၉ ဆိုင်၊ အိမ်ဆိုင် ၄ ဆိုင် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသလို မီးသတ်သမားတဦးနဲ့ တခြား လူတဦးတို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့တယ်လို့ အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေက မသင်္ကာသူ ၁၁ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အဲ့ဒီနေ့ မှာပဲ ရွှေဘိုရဲစခန်းကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ထန်းကုန်းရဲစခန်းက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ လောလော ဆယ်မှာတော့ ထန်းကုန်းရွာမှာ အခြေအနေတွေက တည်ငြိမ်နေပေမဲ့ ဒေသခံတွေကတော့ စိုးရိမ် နေကြဆဲပါ။ ဒေသခံတွေအနေနဲ့ သတိနဲ့ သွားလာနေကြပြီး - ဈေးဆိုင်တချို့ပဲ ပြန်ဖွင့်ကြသလို ဖျက်စီးခံခဲ့ ရတဲ့ မူဆလင်ဈေးဆိုင်တွေကတော့ ပြန်မဖွင့်နိုင်ဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မီးရှို့ဖျက် ဆီးခံရတဲ့ အိမ်တွေက ဒေသခံတွေဟာလည်း ဘာသာရေးကျောင်းမှာ ခိုလှုံနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ရွှေထည်ပစ္စည်း ၂ မျိုးအား ခိုးယူ ခဲ့သူသမီးအား မိဘများက အမှုဖွင့်တိုင် ကြားခဲ့ကြောင်း မှုခင်းရုံးမှသိရသည်။
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းစင်တာ၊ (၂) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ ဦးဘငြိမ်း မှာ ဇနီးဖြစ်သူနှင့်ဆရာကန်တော့ပွဲသို့ ကန်တော့ခံသွားစဉ် ခုတင်အောက်တွင် ရှုံ့အိတ်ဖြင့် ထည့်၍ ဝှက်ထားသော ရွှေ ထည်ပစ္စည်း တန်ဖိုး ၃၇၆ သိန်းခန့် ပျောက်ဆုံးနေသဖြင့် စုံစမ်းရာ ၄င်းတို့ အိမ်တွင်တစ်လခန့် လာရောက်နေထိုင် ခဲ့သော သမီးအရင်းဖြစ် သူက ခိုးယူခဲ့ သည်ဟုဆိုကာ ရဲစခန်းသို့တိုင်ကြားခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရန် ကင်းမြို့မရဲစခန်းမှ (ပ) ၁၈၅/၁၃၊ ပြစ်မှု ပုဒ်မ-၃၈၁ ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေး လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တစ်ဆက်တည်းပဲ လူငယ်တွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာများကို လည်း ပြောပြပေးပါလို့ တောင်းဆိုတတ်ကြတယ်။ ဝေဖန်ရေးကို လိုလိုလား လား တောင်းခံတဲ့စိတ်မျိုးရှိတာ လူငယ်တွေကို ချီးကျူးရမယ်။ ရင့်ကျက်တဲ့ အရွယ် လူကြီးတွေတောင် ဝေဖန်ရေးကို လက်ခံတတ်ကြတာ မဟုတ် ဘူး။ ဝေဖန်သူကို ‘ကက်ကက်လန်’ပြန်ပြီး ရန်တွေ့တတ်ကြတယ်။ ကိုယ့် မှာ ဖြည့်ဆည်းဖို့ လိုအပ် နေတာတွေကို သိချင်စိတ် ရှိတာလည်း ကောင်း တာပဲ။ တစ်ပါးသူကို ထောက် ပြပေးပါလို့ တောင်းဆိုတာက ပိုပြီး နှစ် လိုဖွယ် ကောင်းတယ်။ ပလွှားစိတ် မရှိ တာကို ညွှန်ပြတယ်။ ဒီအချက်
တွေကြောင့်လည်း လူငယ်တွေနဲ့ ‘ပလဲနံပသင့်’ တာ ဖြစ်တယ်။ လူကြီးတွေ(အထူးသဖြင့်) မြို့သားပညာတတ် လူကြီးတွေက အများအားဖြင့် ဟန်များတယ်။ (ခုခေတ်စကားနဲ့ဆို ပဲများတယ်ပေါ့)။ တကယ် သိတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ သိချင်တတ်ချင်ယောင် သိပ်လုပ်တတ်ကြတယ်။
တယ်။ မကြိုက်ရင် မကြိုက်ဘူး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတယ်။ ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ပရိသတ်ကိုညာပြီး သရေထိုး သွားတဲ့ လုပ်ပွဲမျိုးဆိုရင် သည်းခံမနေဘူး။ ၀ိုင်းပြီး အော်ကြဟစ်ကြ ဆူကြတာပဲ။ လက်ဝှေ့ထိုးတယ်ဆိုတာ အရှုံးအနိုင်သိဖို့ ဖြစ်တယ်။ အရှုံးအနိုင် အဖြေမထွက်ရင် ပွဲပြီးတယ်လို့ မယူဆဘူး။ ပညာတတ်လောကမှာ ရေပန်း စားတဲ့ Win-Win ဆိုတာ တကယ့်ပြိုင် ပွဲတွေမှာ မရှိနိုင်ဘူး။ ပြိုင်ပွဲ ဆိုကတည်း က အရှုံးအနိုင်သိဖို့ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလား။ သရေဆိုတာက ပွဲမပြီးသေးဘူး။ နောက်ထပ် ပြိုင်စရာ ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ ဘောလုံးပွဲမှာ ပူးတွဲပထမဆိုတာ မရှိဘူး။ ရာသီကုန်မှာ အမှတ်တူ၊ ဂိုးကွာခြားမှု တူ ဖြစ်နေရင် အဲဒီနှစ်သင်း ထပ်ကန်ရတယ်။ သရေဖြစ်နေရင် အချိန်ပို ကစားရတယ်။ အချိန်ပို ထိ သရေဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင် အရှုံးအနိုင် မပေါ်မချင်း ပယ်နယ်တီကန်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရတယ်။
ဟန်မဆောင်တတ်တာ၊ ပွင့်လင်းတာကြောင့် လူငယ်တွေနဲ့ပိုပြီး ရင်း ရင်းနှီးနှီး နေဖြစ်တယ်။ သူတို့စိတ်ထဲ ရှိတဲ့အတိုင်း ပြောတာကို ကိုယ်က နားထောင်ပေး သလို၊ ကိုယ်ပြောတာတွေကိုလည်း သူတို့က စေတနာ မှန်နဲ့ ပြောတာပဲဆိုပြီး လက်ခံတယ်။ လူကြီးနဲ့လူငယ် သဟဇာတဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးက စေတနာ မှန်ဖို့ပဲ။ လူငယ်တွေက သူတို့လိုအပ် တာတွေ ထောက်ပြပါဆိုရင် ကိုယ်မြင် တွေ့ တဲ့အတိုင်း ပြောလိုက်တယ်။ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာတွေထဲက သူတို့ မကြိုက်တာတွေ ကို ပြောရင်လည်း လက်ခံသင့်တာကို လက်ခံပြီး ရှင်းပြဖို့ လိုအပ်တာကို ရှင်းပြ လိုက်တယ်။ ဟန်လုပ်ပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ‘ဗုံနဲ့မြှောက်’ နေတာ မျိုး တွေမရှိဘူး။ လူကြီးရော လူငယ်ပါ စိတ်လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတယ်။ စကားပြောရ တာ နှစ်ဦးစလုံးအတွက် အကျိုးရှိတယ်။
အဲဒီလိုလူငယ်တွေက သူတို့ လူငယ်များအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့အရာ ဘာလဲလို့ မေးကြတာကိုလည်း ကိုယ့်ခံယူချက်အတိုင်း ဖြေလိုက်ပါ တယ်။ မျှော် လင့်ချက်နဲ့ စံပြုပုဂ္ဂိုလ် (Role Model) ဆိုတဲ့ အရာနှစ်မျိုးဟာ လူငယ်တိုင်း အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာ ဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ်ခု ခိုင်ခိုင်မာ မာ ပြတ်ပြတ် သားသား ရှိမှ လူ့လောကမှာ လူတစ်လုံး သူတစ်လုံး (Somebody) ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနှစ် ခု မရှိရင် ပဲ့မပါတဲ့လှေလို ဟို ဘက် မျောလိုက်၊ဒီဘက်မျောလိုက်နဲ့ ဘယ်သောင် ဘယ်ကမ်းမှ ဆိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ လူရာမ၀င်တဲ့ (Nobody) ယောင်ခြောက် ဆယ် အဖြစ်နဲ့ နိဂုံးချုပ်ရမှာ သေချာတယ်။
လူ့ဘ၀ဆိုတာ မျှော်လင့်ချက်ကြောင့် အဓိပ္ပာယ် ရှိနေတာ ဖြစ် တယ်။ မျှော် လင့် ချက် ကင်းမဲ့တဲ့ဘ၀ဟာ အသက်ရှင်လျက် သေနေတဲ့ဘ၀ ဖြစ်တယ်။ ဘာမှ အနှစ်သာရမှ မရှိဘူး။ အချည်းနှီးပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ ဆင်းရဲဆင်းရဲ တစ်နေ့မှာ ဆင်းရဲတဲ့ဘ၀ က လွတ်မြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ရှိရင် ဆင်းရဲပေမယ့် ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။ ဆင်းရဲလို့ စိတ်မချမ်းသာတာ မပျော်နိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ မျှော်လင့်ချက် မရှိလို့ စိတ်မချမ်းသာတာ၊ မပျော်နိုင်တာ။ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ စိတ် ကူးယဉ်မှုဆိုတာ ဆိတ်သုဉ်းသွားရင် အဲဒီလူဟာ ရှင်လျက်သေနေတဲ့သူပဲ။ ဘာမှ သုံးစားလို့ မရတော့ဘူး။ လူမှန်ရင် မျှော်လင့်ချက် ရှိရမယ်။ စိတ်ကူး ယဉ် တတ်ရမယ်။
အထူးသဖြင့် လူငယ်မှန်ရင် စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်တွေ အမြဲမက်နေရမယ်။ အိပ်မက် မမက်တတ်ရင် လူငယ် မဟုတ်ဘူး။ ”ဖြစ်တော့ဖြစ်ချင်တာပေါ့ ဒါပေမဲ့ …” ဆိုတာ အရှုံးသမားရဲ့ လက်သုံးစကား ဖြစ်တယ်။ လူငယ်မှာ ဒါပေမဲ့ (but) ဆိုတာ လုံးဝမရှိရဘူး။ ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တစ်ခုတည်း သာ ရှိရမယ်။ လောကမှာ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ ဘာမှမရှိဘူး။ မလုပ်ရသေးလို့ မဖြစ်သေးတာသာ ဖြစ်တယ်။ လုပ်ရင်ဖြစ်တယ်။ သွားရင်ရောက်တယ်။ ယူရင်ရတယ်။ မဉ္ဇူသက နတ်ပန်းကိုမှ ဆွတ်ချင်သလား။ မရမချင်း ဆွတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဇွဲသတ္တိရှိရင် မရဘဲ မနေဘူး။ ရမှာသေချာတယ်။ ဇွဲနဲ့သတ္တိ မရှိဘဲ ရတာကိုပဲ ယူလိုက်ပါတော့မယ် ဆိုရင်တော့ မဉ္ဇူသကနတ်ပန်းကို မရဘဲ ခေါင်ရမ်းပန်းကိုပဲ ရလိမ့်မယ်။ ခေါင် ရမ်းပန်းကို ခေါင်းမှာပန်တဲ့ လူဆိုရင် ရွာသူရွာသားတွေက ရွာထဲလုံးဝ အ၀င်ခံ မှာ မဟုတ်ဘူး။ ရွာနာတယ်ဆိုပြီး မောင်းထုတ်ကြမှာ သေချာတယ်။
လူငယ်တိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ နောက်တစ်မျိုးက စံပြုပုဂ္ဂိုလ် (Role Model)ဖြစ်တယ်။ ကလေး ဘ၀ကတည်းက အားကျအတုယူစရာ စံပြုပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦး ရှိနေသင့်တယ်။ စံပြုပုဂ္ဂိုလ်ကို အားကျအတုယူပြီး ကြိုးစားအား ထုတ် မှုဟာ လူတိုင်းအတွက် အရေးပါတယ်။ ရှေးခေတ်က ကိုအောင်ဆန်းတို့၊ ကို ဗဟိန်းတို့ တစ်တွေဟာ အိုင်ယာလန်သူပုန်ကြီး မိုက်ကယ်ကောလင်းကို အားကျအတုယူပြီး အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တွေ ကို မောင်းထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ ဂျူးလိယက်ဖူးချစ်တို့ ဟိုဆေးရီဇော် တို့ကို ချီးကျူးခဲ့ ကြတယ်။ နောက်ခေတ် လူငယ်တွေ ကျတော့ မော်စီတုန်းနဲ့ ဟိုချီမင်း၊ ကက်စထရိုနဲ့ ချီဂွေဗာရား၊ ငုယင်ဗန်ထရွိုင်းစတဲ့ တော်လှန်ရေး သမားကြီးတွေကို စံပြုပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် အားကျ အတုယူခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကလေးဘ၀ကဆိုရင် အင်္ဂလိပ် ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ရော် ဘင် ဟုဒ်လို၊ အိုင်ဗင်ဟိုလို မတရားမင်းတွေကို ဆန့်ကျင်ခြားနားပြီး ဆင်းရဲသား တွေကို ကူညီတဲ့ လူစွမ်းကောင်းတွေကို သိပ်အားကျခဲ့ရတယ်။ ကစားရင်တောင် ရော်ဘင်ဟုဒ် လုပ်တမ်းမှ ကစားချင်တယ်။ ထောင်အ ကြိမ်ကြိမ် ကျခဲ့ရတဲ့ သ တင်း သမားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရတာ ငယ်စဉ် က ရော်ဘင်ဟုဒ်တို့၊ အိုင်ဗင်ဟို တို့ကို အားကျအတုယူခဲ့လို့ ထင်ပါရဲ့။ အခုခေတ် ကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေမှာ အဲဒီလိုစံပြုပုဂ္ဂိုလ်မျိုး တော်တော် ရှားပါးတာ တွေ့ရတယ်။ ကျောင်းသင် ဖတ်စာ တွေထဲမှာ မတွေ့ရသလို အပြင် ဖတ်စရာတွေထဲမှာလည်း မတွေ့နိုင်ဘူး။ ဒီခေတ်မှာ ရော်ဘင်ဟုဒ်လို လူစွမ်းကောင်းတွေ မတွေ့နိုင်တော့ပေမယ့် မျက်စိ နှစ်ဖက်စလုံး မမြင်ရတဲ့သူနဲ့ ခြေနှစ်ဖက်စလုံး ပြတ်နေသူတွေက ဧ၀ရက် တောင်ထိပ် ကို ရောက်အောင်တက်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ အဖြစ်တွေ၊ ၁၃ နှစ်သမီးလေး တစ်ယောက်တည်း ရွက်လှေတစ်စင်းနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ပတ် ပတ်ခဲ့တဲ့ သတင်းတွေ နေ့စဉ်တွေ့မြင် ဖတ်ရှုနေရတယ် မဟုတ်လား။ ဒါတွေဟာ ကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေ အတွက် စံပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။
ဒီလို သတင်းအဖြစ်အပျက်တွေကို ကျောင်းဖတ်စာတွေထဲ ရောက်အောင် ပို့သင့် ကြ ပါတယ်။ လူစွမ်းကောင်းတွေ အကြောင်းမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အိန္ဒိ ယနိုင်ငံက ကူသူကယ်သူမဲ့ ဖြစ်နေကြတဲ့ ဆင်းရဲသားတွေနဲ့ ရောဂါသည် ဒုက္ခိတတွေကို ကယ်တင်ရေး အတွက် သူ့ဘ၀တစ်ခုလုံး မြှုပ်နှံပြီး ကြိုးစားပမ်းစား ဆောင် ရွက်ခဲ့တဲ့ လူဖြူခရစ်ယာန် သီလရှင် သူတော်ကောင်း မကြီး မာသာထရီဇာ ရဲ့ အကြောင်းနဲ့ သူ့လုပ်ရပ်တွေ အကြောင်းလည်း ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးက စာသင်ခန်း တွေထဲမှာ ကလေးတွေ ဖတ်ရှုသင် ကြားနေနိုင်အောင် ဆောင်ရွက် သင့်ကြပါ တယ်။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေ တစ်နေ့တခြား တိုးပွားများပြားလာပြီး၊ လူသားတွေ ရိုင်းသထက်ရိုင်း လာနေတဲ့ အတွက် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး ပစ္စန္တရစ် အရပ်သဖွယ် ဖြစ်နေ တဲ့ ခေတ်ကာလကြီးမှာ မာသာထရီဇာဆိုတဲ့ မေတ္တာရှင် သူတော်စင်ကြီးဟာ အကောင်းဆုံးသော စံပြုပုဂ္ဂိုလ် မဟုတ်ပါလား ခင်ဗျာ။
စည်းကမ်းမဲ့ မောင်းနှင်မှုကြောင့် အရေးယူ ခံရသည့် ခရီးသည်တင် ယာဉ်မောင်းက ယာဉ်ထိန်းရဲ နှစ်ဦးကို ဓားဖြင့်ထိုး
တာမွေမြို့နယ် လေးထောင့်ကန်လမ်းနှင့် ပင်ရွှေညောင် လမ်းထောင့်၌ သြဂုတ် ၂၉ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ၁၈၇ ခရီးသည်ယာဉ် ကားတစ်စီး၏ ယာဉ်မောင်း ဖြစ်သူက ၎င်း၏ကားကို ချလန်ဖြတ် အရေးယူခြင်းနဲ့ ပတ်သက်၍ မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကို ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ဓားဖြင့် အထိုးခံရသည့် ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ကြပ်တစ်ဦးမှာ ညာဘက်လက်သန်း ဒဏ်ရာများ ရရှိပြီး ကျန်ရဲတပ်သား တစ်ဦးမှာ ဘယ်ဘက်ခါးတွင် ဓားထိုးဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ အဆိုပါနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဒေါပုံမြို့နယ်၊ နွယ်အေးရပ်ကွက် နေထိုင်သူ ယာဉ်မောင်း ခင်မောင်ဌေး မောင်းနှင်သည့် ၁၈၇ ခရီးသည်တင် ယာဉ်သည် တံခါးဖွင့် မောင်းခြင်းကြောင့် ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးက တားဆီးကာ အရေးယူခဲ့သည်။
ယာဉ်မောင်း ခင်မောင်ဌေးမှာ မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကို ဆဲဆိုပြီး ဓားဖြင့်ထိုးမည်ဟု ကြိမ်းဝါးကာ ကားအားမောင်းနှင် ထွက်သွားကြောင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တစ်ခေါက် ပြန်လာကာ ယခုလို ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ ခွဲမှူးရုံး(ရန်ကုန်)မှ တာဝန်ရှိသူ ရဲမှူးသာဌေးက ''ဓားနဲ့အထိုးခံရတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး အခြေအနေက လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ကောင်းပါတယ်။ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ယာဉ်မောင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့် ထားပါတယ်'' ဟု သြဂုတ် ၃၀ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဆိုသည်။
တာမွေမြို့မ ရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ်တစ်ဦးက ''ကျူးလွန်သူကို ရှာဖွေနေပါတယ်။ ကျူးလွန်တဲ့သူ တစ်ဦးတည်း ဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်း စစ်ဆေးနေတုန်းပါပဲ'' ဟု ပြောကြားသည်။
အလားတူ သြဂုတ် ၁၈ ရက် ညပိုင်းက မတ်တူးငွေမင်ရောင်ကားကို မောင်းနှင်သည့် အမျိုးသား တစ်ဦးက ညဘက် ယာဉ်စစ်ဆေးရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ခြေထာက်ဖြင့်ကန်၊ လက်သီးဖြင့်ထိုးကာ ဒုရဲအုပ် ရဲဝန်ထမ်း တစ်ဦးကို ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့ရာ ရဲဝန်ထမ်း၏ ညာဘက်လက်တွင် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ကျူးလွန်သူကို ဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် သြဂုတ် ၂၃ ရက် ည ၈နာရီခွဲခန့်က မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ အနှိပ်ခန်း တစ်ခုအား ဖွင့်/မဖွင့် သွားရောက် မေးမြန်းသည့် ရဲတပ်သား နှစ်ဦးကို အနှိပ်ခန်း အတွင်းရှိ လူငယ်တစ်စုက ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ တရားခံများကို ဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ရဲဝန်ထမ်းများကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှုများမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ထိခိုက်နိုင်၍ သက်ဆိုင်ရာက ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသင့်ကြောင်း ဝေဖန်သုံးသပ်မှုများ ရှိနေသည်။
နိုင်ငံတကာအလှမယ်များ ပါဝင်မည့် SEA Games ဖက်ရှင်ရှိုး ပြုလုပ်မည်
SEA Games လှုံ့ဆော်ရေး ဖျော်ဖြေပွဲများကို ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် ပြုလုပ်နေသည့် ADMA MEDIA မှနေ၍ နိုင်ငံတကာအလှမယ် ခုနစ်ဦးပါဝင်မည့် SEA Game ဖက်ရှင်ရှိုးကို အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ အမျိုးသား ကဇာတ်ရုံ၌ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းမီဒီယာမှ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ ဦးဝေမင်းမောင်က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
“ဒီပွဲလေးကို အဓိကလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မကြာမီကျင်းပမယ့် SEA Game ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ပရိသတ်တွေကို အစွန်းရောက်တဲ့ အားပေးပုံတွေအစား ကိုယ့်အသင်း အနိုင်ရအောင် ဘယ်လို အမိုက်စား ဖက်ရှင်ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ သွားရောက် အားပေးကြမယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကနေ Message လေးပေးချင်လို့ပါ။ ဒီပွဲမှာက ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာ အလှမယ်တွေရဲ့ ဖက်ရှင်ရှိုးလာမယ်။ ဒါပြီးရင် မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဝှေ့ သုံးချီ စိန်ခေါ်ပွဲတစ်ခုနဲ့ ခြင်းအလှခတ်တဲ့ အစီအစဉ်လေးတစ်ခု ထည့်ထားတယ်။ ဒီအစီအစဉ်တွေပြီးရင် ဖက်ရှင်ရှိုး တစ်ခေါက်ပြန်လာမယ် ဒီပွဲကဝင်ကြေးအခမဲ့ ဖြစ်မလား၊ လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ပွဲ ဖြစ်မလားဆိုတာ မကြာခင် ကြေညာပေးပါ့မယ်” ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
ယင်းပွဲတွင် အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်၊ ဘရာဇီး၊ အီတလီ၊ မကာအို၊ မွန်ဂိုးလီးယား၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတို့မှ အလှမယ်များက SEA Game ပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အားကစားအသင်းများ၏ ဝတ်စုံများကို ဝတ်ဆင်၍ ဖက်ရှင်ရှိုးလျှောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ Miss International 2012 ပြိုင်ပွဲတွင် Miss Internet ဆုရရှိခဲ့သူ နန်းခင်ဇေယျာလည်း ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ယခုဖျော်ဖြေပွဲမှာ ADMA MEDIA မှ တင်ဆက်သော နောက်ဆုံး SEA Game ဖျော်ဖြေပွဲဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလတွင်မူ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်တို့သို့ အနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင်မည့် ကားများဖြင့် လှည့်လည်၍ SEA Game လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ SEA Game လှုံ့ဆော်ရေးသီချင်းများ သီဆိုခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သွာမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းမီဒီယာမှ သိရသည်။
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် လှုံ့ဆော်ရေး သီချင်းများကို တေးသံရှင် ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ဖြိုးကြီး၊ ထူးအယ်လင်း၊ ထွန်းထွန်း၊ ဘန်နီဖြိုး၊ ဟဲလေး၊ ဗညားဟန်၊ ဆုန်သင်းပါရ်၊ ချမ်းချမ်း၊ နေနေ၊ နီနီခင်ဇော်၊ မေခလာ၊ ပန်ဆုပြည့်ကျော်၊ ပန်းအိဖြူတို့က ပရိသတ်များသို့ မိတ်ဆက်သီဆို ပြသသည့် အစီအစဉ်နှင့် ဒါရိုက်တာမောင်သီ စီစဉ်ပြီး သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်၊ မိုးအောင်ရင်၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်၊ အိချောပို၊ ခင်လှိုင်၊ ဒိန်းဒေါင်၊ ဧရာ၊ ညောင်ညောင်တို့ ပါဝင်သည့် ပြိုင်ပွဲ ပြဇာတ်တို့ကို သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ၌ တင်ဆက်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား လုံခြုံရေး ရဲမေ ၁၇ ဦး ပုဂံဇုန်၌ စတင်တာဝန် ထမ်းဆောင်
၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား ရာသီအတွက် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား လုပ်ငန်း လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ တိုးမြှင့် ချထား ပေးလျက်ရှိရာ အမျိုးသမီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား တိုးမြှင့်လိုက် ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား များအား ပိုမို လုံခြုံ စေနိုင်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဧည့်လမ်းညွှန် အသင်း ၊ ပုဂံဇုန် မှ သိရသည်။
ယခင် ပုဂံဒေသ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လုယက်မှု အများစုမှာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား အမျိုးသမီးများ ကိုသာ ဦးတည်သည့် အတွက် ယခုကဲ့သို့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား လုပ်ငန်း လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များအတွင်း အမျိုးသမီး ရဲမေအင်အား တိုးမြှင့် လိုက်ခြင်းကြောင့် အဆိုပါ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား အမျိုးသမီး များ၏ လုံခြုံမှု ပိုမို ပေးစွမ်း နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ လုံခြုံရေး အတွက် ထပ်မံ တိုးချဲ့ ထားသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား ၆၄ ဦးအနက် ၁၇ ဦးမှာ ရဲမေများ ဖြစ်ကြပြီး ၄င်းတို့မှာ ခရီးသွားများ အဓိက သွားလာနိုင်မည့် နေရာများ နှင့် တန်ခိုးကြီး ဘုရားများ အနီး၌ အဓိက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် နေသည်ဟု သိရှိရသည်။
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ကျောင်းကြိုသွားသည့် အမျိုးသမီး၏ပါးကို ဓါးဖြင့် ခြစ်ခဲ့သည့် တရားခံများအား (၃)ရက်အတွင်းဖေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ
၂၆.၈.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၄၃၀ အချိန် ဒေါ်ချိုချိုဝင်း၊(၄၆)နှစ်၊(ဘ)ဦးစိန်ဝင်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နေသူသည် တောင်ဥက္ကလာပ
မြို့နယ်၊ အ.ထ.က(၃)ကျောင်းသို့ ကျောင်းကြို ရန် ဆိုက္ကားဖြင့်သွားစဉ်
ကျောင်းလမ်းဆုံအရောက်၌ အမည်မသိလူ(၂)ဦးအနက်တစ်ဦးမှ ဆိုက္ကား အားတားကာ ကျန်တစ်ဦးမှသံပြားဝိုင်းဖြင့်ခြစ်ခဲ့သဖြင့် ဒေါ်ချိုချိုဝင်း၏ ယာပါးတွင် ၃လက်မခန့် ဒေါင်လိုက်ပြတ်ရှဒဏ်ရာရရှိခဲ့သောကြောင့် အရေးယူပေးပါရန် ဒေါ်ချိုချိုဝင်းမှ တိုင်တန်းခဲ့၍
တောင်ဥက္ကလာပမြို့မရဲစခန်း (ပ)၃၁၂/၂၀၁၃၊ပုဒ်မ ၃၂၆/၃၄၁/၁၁၄ ဖြင့်
တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ခဲ့ရာ
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတရားခံများဖြစ်သည့် လှဌေး၊ (ဘ)ဦးကျော်သိန်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ လှတိုး၊ (ဘ)ဦးစံရင်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊(၁၀)တောင်၊ သာကေတမြို့နယ်၊
ဟိန်းမင်းလတ်(ခ)အောင်အောင်၊ (ဘ)ဦးဖိုးထောင်၊အားကစားကွင်းဝင်း၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်၊ မိုးသူ၊(ဘ)ဦးသန်းဌေး၊ မှော်စက်ရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်နှင့် ဇော်ကြီး၊ (ဘ)ဦးသောင်းစိန်၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်နေသူတို့(၅)ဦးအား ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီး(၃)ရက်အတွင်း
လှဌေး (မြေပဲယိုလုပ်ငန်း) တို့မှာ မုန့်လုပ်စဉ်အညှော်နံ့ နံသည့်ကိစ္စဖြင့် မကြာခဏစကားများခဲ့ကြသည့်အတွက် လှဌေးမှ မကျေမနပ် ဖြစ်ကာ
ဒေါ်ချိုချိုဝင်း၏ မျက်နှာအားရုပ်ဆင်းပျက်အောင် လုပ်ပေးရန်အတွက်
တို့အား ငွေကျပ်(၅)သိန်းဖြင့် ငှါးရမ်းခဲ့ကြောင်း၊ လှတိုးနှင့်
ဟိန်းမင်းလတ်(ခ)အောင်အောင်တို့မှ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ကျူးလွန်ခြင်း
မပြုဘဲ မိုးသူနှင့် ဇော်ကြီး တို့(၂)ဦးအားထပ်မံခိုင်းစေခဲ့သဖြင့် အခင်းဖြစ်ပွားသည့်အချိန်၌ ဒေါ်ချိုချိုဝင်းစီး လာသောဆိုက္ကားရှေ့တွင်
ဇော်ကြီးမှပိတ်ရပ်ကာ မိုးသူမှခဲတံချွန်ခေါက်ဓါးဖြင့် ဒေါ်ချိုချိုဝင်း၏ ယာပါးအား ဆွဲခြစ်ကျူးလွန်ထွက်ပြေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လှဌေးမှ ငှားရမ်းခငွေကျပ်(၅)သိန်းအား လှတိုးထံပေးအပ်ခဲ့ရာ လှတိုးမှ
ငွေကျပ်(၂၃၀၀၀၀)ယူကာ၊ ဟိန်းမင်းလတ်(ခ)အောင်အောင် အား
ငွေကျပ် (၁၈၀၀၀၀)၊ မိုးသူနှင့် ဇော်ကြီးတို့အား တစ်ဦးလျှင်ငွေကျပ် (၄၅၀၀၀)စီ ခွဲဝေပေး အပ်ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်ချိုချိုဝင်းနှင့် အခင်းဖြစ်နေရာတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြသူ
တရားခံ(၂)ဦးမှာ ရန်ငြိုးရန်စ နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ပတ်သက်
သိရှိမှုမရှိဘဲ တရားခံ(၂)ဦးမှ ငွေကြေးရရှိ၍ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြခြင်း သာဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
လက်နက်ခဲယမ်းများ လျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်းထားမှုရှိမရှိ အိမ်တိုင်ရာရောက်စစ်ဆေးမည်
လက်နက် ခဲယမ်းများ ကြိုတင်စုဆောင်းပြီး မသမာသူတစ်စုက အကြမ်းဖက် မှုများပြုလုပ်မည်ဟု ကြားသိရ သည့်သတင်းများအရ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ ရပ်ကွက်နှင့် မြို့နယ်အချို့ရှိ နေအိမ်များတွင် လက်နက်ခဲယမ်းများလျှို့ဝှက် သိမ်းဆည်းထားမှုရှိမရှိကို လုံခြုံ ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက လိုက်လံ စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။
ယင်းကဲ့သို့စစ်ဆေးမှုများ ကို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များနှင့်အတူ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ အမာခံသ တင်းပေးများဖြင့် ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပြီး တရားမဝင်လက်နက် ကိုင်ဆောင်မှုများတွေ့ရှိပါက လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုဥပဒေ ဖြင့် ထိရောက်စွာအရေးယူသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှ အဆင့်မြင့်အ ရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍''ကန့် ဘလူအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရပ်မှာ စုံစမ်းတွေ့ရှိတာတွေအရ ဓား၊ ဂျင်ကလိ၊ တုတ်နဲ့ အခြားသေစေ နိုင်တဲ့လက်နက်စုဆောင်းထားမှု တွေရှိတယ်။ တခြားမြို့နယ်ဒေသ တွေမှာလဲ ဒီလိုကြိုတင်စီမံထားတာတွေမ ရှိဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ရမယ်။ လာ မယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်း လုပ်ဆောင် သွားမှာပါ''ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လည်း ယင်းကဲ့သို့အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ် ပွားနေစဉ်အချိန်တွင် လက်နက်ခဲ ယမ်းများစုဆောင်းခြင်းမပြုရန်၊ သုံး ရက်အတွင်းပြန်အပ်ရန် စသဖြင့် ညွှန်ကြားချက်များပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ညွှန် ကြားချက်မလိုက်နာသည့်သူများ ကို တရားမဝင်လက်နက်ကိုင်ဆောင် မှုဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များရှိကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ''ကျွန်တော် တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ အဲဒီလို လုပ်တာ ထိရောက်မှုရှိတယ်။ အ မာခံသတင်းပေးတဲ့သူတွေနဲ့ စုံစမ်း ပြီး တစ်အိမ်ဆင်းတစ်အိမ်တက်လိုက်ရှာတာ။ မရှာခင် အရင်ကြေ ညာတယ်။ သုံးရက်အချိန်ပေး တယ်။ ပြီးတော့မှ ရှာလို့လက်နက် တွေတွေ့ရင် အရေးယူတယ်''ဟု ပြောသည်။
အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခများ မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြီးဆုံးခြင်းမရှိသေးဘဲ မကြာခဏဖြစ်ပွား နေသေးကြောင်း သိရသည်။
မိုင်လီနှင့် လမ်းခွဲရန် ဟမ်းဆွော့သ်အား သူငယ်ချင်းများ တိုက်တွန်း
MTV ဂီတဗီဒီယို ဆုပေးပွဲတွင် လူအများ ဝေဖန်စရာ ဖျော်ဖြေမှုမျိုး ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်ကို စွန့်ခွာရန် လီယမ်ဟမ်းဆွော့သ်အား သူငယ်ချင်းများက ဝိုင်းဝန်း တိုက်တွန်းနေကြောင်း သိရှိရသည်။ Hunger Games: Catching Fireစတား လီယမ်သည် မိုင်လီနှင့် ချစ်သူများအဖြစ် ကာလအတန်ကြာ ရှိနေခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် ၎င်း၏ အနာဂတ် အနုပညာဘဝအတွက် မိုင်လီကို စွန့်ခွာသင့်ပြီဟု ဖိအားပေး အကြံပြုမှုများ ကြုံနေရသည်။ မိုင်လီသည် MTV၏ ဆုပေးပွဲ အစီအစဉ်တွင် ရော်ဘင်သီကီနှင့် တွဲဖက်ကာ ကာမရာဂ နှိုးဆွလွန်းပြီး ရိုင်းပြပွင့်လင်းလွန်းသည့် ဖျော်ဖြေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ဝေဖန်မှုများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ အသက်(၂၀)အရွယ်ရှိ မိုင်လီသည် သူမထက် (၃)နှစ်ကြီးသည့် လီယမ်နှင့် (၃)နှစ်ကြာ တွဲနေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
The Last Song ဇာတ်ကားတွင် တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ရင်း ချစ်သူများ ဖြစ်လာသည့် စုံတွဲသည် ပြီးခဲ့သည့် လပိုင်းများက ဆက်ဆံရေး အေးခဲကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ဖူးသော်လည်း လက်တွေ့ လမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်း မရှိချေ။ Hannah Montana ကြယ်ပွင့်ဟောင်း မိုင်လီ၏ MTV ဖျော်ဖြေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူမသည် ကလေးဘဝမှ လူကြီးအဖြစ် ပြောင်းလဲလာသည်ကို ဖွင့်ဟပြခြင်းဟု ထောက်ခံသူများ ရှိသလို အမြင်မတင့်တယ်လွန်းကြောင်း ဝေဖန် ပြစ်တင်သူများလည်း ရှိနေသည်။ လီယမ်၏ သူငယ်ချင်းများကမူ မိုင်လီ၏ ပုံရိပ်သည် တက်လမ်းကောင်းမွန်နေသော ဟောလီးဝုဒ် လူငယ်မင်းသား၏ အနာဂတ်ကို ထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်း စိုးရိမ်တကြီး သတိပေးနေကြသည်။ လီယမ်နှင့် နီးစပ်သူများက ယင်းအခြေအနေကို လီယမ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အလေးအနက် တွေးတောနေသော်လည်း တစ်စုံတစ်ရာ မှတ်ချက်စကား ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးဟုလည်း ပြောကြားသွားကြသည်။
ကွန်ဒုံးမသုံးခဲ့ခြင်းကြောင့် အမေရိကန်အပြာမင်းသမီး နောင်တရ
ဘ၀တွင် ပထမဆုံးရိုက်ကူးသည့် အပြာကားဇာတ်ဝင်ခန်းများ၌ ဇာတ်လိုက်မင်းသားနှင့် ကွန်ဒုံး
မသုံးဘဲကာမစပ်ယှက်ခဲ့မှုကို နောင်တကြီးစွာ ရမိကြောင်းနှင့် အပြာကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
တွင် ကွန်ဒုံးမသုံးမနေရဟူသော စည်းမျဉ်းအကောင်အထည် ပေါ်လာအောင် တိုက်တွန်းဆော်
ဩသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်အပြာမင်းသမီး ဆစ်ဒနီလယ်သာက ဩဂုတ်လ၂၈ရက်နေ့
အပြာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ သူဌေးနှင့် တယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့် ရာဂမွှန် စာတိုများ အပြန်အလှည်
ပေးပို့ရာမှ ချစ်ကြိုက်မိကြပြီး လယ်သာသည် ၎င်း၏ ပထဆုံးအပြာကားဖြစ်သော Weiner & Me
ကို ဇာတ်လိုက် မင်းသား ဇင်ဒါကိုဗတ်စ်နှင့် ကွန်ဒုံးမသုံးဘဲ ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် လယ်သာနှင့် မရိုက်ကူးမီ ဇင်ဒါကိုဗတ်စ်က အခြားအပြာကား ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခု၌
ကွန်ဒုံးမသုံးဘဲ ကာမစပ်ယှက်ခဲ့သည့် အပြာ မင်းသမီး ကင်မရွန်းဘေးမှာအိပ်ခ်ျအိုင်ဗီပိုးကူးစက်
ခံရပြီဖြစ်ကြောင်း ဩဂုတ်လလယ်တွင် အဆိုပါ မင်းသမီးကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့ရာ
လယ်သာမှာ အကြီးအကျယ် တုန်လှုပ်သွားရုံမျှမက ထိုသတင်းကြောင့် အပြာကား ထုတ်လုပ်
ရေးလုပ်ငန်းကိုလည်း အာဏာပိုင်များက ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။
အဆင့်မြင့်ဆေးခန်းများတွင် လယ်သာက မိမိတွင် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံ ထားရခြင်းရှိမရှိအပူ
တပြင်းသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီပိုး မတွေ့ရကြောင်း အဖြေထွက်လာသည့်အခါမှ
လယ်သာမှာ သက်ပြင်းချနိုင်ခဲ့သည်။လယ်သာက မိမိအနေဖြင့် အပြာရုပ်ရှင်လောကကို
စွန့်ခွာမည် မဟုတ်သော် လည်း နောင်ရိုက်ကူးမည့် ဇာတ်ကားများတွင် ကွန်ဒုံးသုံးမှရိုက်ကူး
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ် ပြည်နယ်အတော်များများတွင် အပြာကားထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း၌ ဇာတ်
၀င်ခန်းများ ကို ကွန်ဒုံးသုံးရိုက်ကူးရမည်ဟု ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန် ထားသော်လည်း ထုတ်
လုပ်သူနှင့်မင်းသားမင်းသမီးများက မိမိတို့သည် ပုံမှန်ဆေးစစ်မှုခံယူသူများဖြစ်သဖြင့် ထိုသို
့ညွှန်ကြားရန်မလိုကြောင်း၊ ကွန်ဒုံး အသုံးပြုပါကရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်ကို ကျေနပ်မှုအပြည့်
ကင်ညာတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက အမျိုးသားနှစ်ဦးကို တစ်ပြိုင်တည်း လက်ထပ်
ကင်ညာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီး (၁)ဦးကို အမျိုးသား (၂)ဦးက ခွဲဝေ လက်ထပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီးသည် အမျိုးသား (၂)ဦးလုံးနှင့် (၄)နှစ်ကျော်ကြာအောင် ချစ်ကြိုက်နေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့အနက်မှ တစ်ဦးဦးကို အရွေးခက်နေကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်မူ အမျိုးသား (၂)ဦးဖြစ်သော ဆီလ်ဗက်စတာ အမ်ဝမ်ဝါနှင့် အီလီဂျာ ကီမာနီတို့ နှစ်ဦး သဘောတူ ညှိနှိုင်းကာ အမျိုးသမီးနှင့် တစ်အိမ်တည်း အတူနေထိုင်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီး၏ ကလေးများကိုလည်း နှစ်ဦးအတူ ပျိုးထောင်သွားရန် ၎င်းတို့ချင်း သဘောတူညီမှု ရရှိသွားခဲ့သည်။
ရှေ့နေများက အဆိုပါ လက်ထပ် ထိမ်းမြားမှုသည် ပါဝင်ပတ်သက်သူ အားလုံးက ဥပဒေကြောင်းအရ အသိအမှတ်ပြု လက်ခံလျှင် တရားဝင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သတင်းများက အမည်ဖော်မပြသော အမျိုးသမီးသည် အီလီဂျာရော၊ ဆီလ်ဗက်စတာနှင့်ပါ (၄)နှစ်ကျော်ကြာ ချစ်သူအဖြစ် နေထိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦး အမျိုးသမီးအတွက် ရန်ဖြစ် သတ်ပုတ်ခဲ့ကြသည့်နောက် မွမ်ဘာဆာခရိုင် ရဲမှူးဖြစ်သူ အက်ဒ်ဟာလာ အက်ဘ်ဒူရာမန်က နှစ်ဦးအတူ လက်ထပ်ကြရန် အကြံပြုခဲ့ပြီး ယင်းကိစ္စက လက်တွေ့ ဖြစ်မြောက်သွားခြင်းဟု သိရသည်။
"ကျွန်တော်တို့ ဇနီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြန်အလှန် ခြိမ်းခြောက်တာမျိုး မပြုလုပ်ဖို့၊ သဝန်မတိုဖို့ အချင်းချင်း သဘောတူညီမှု ယူခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဇနီးကလည်း တစ်ယောက်ယောက်ကို အတည်တကျ ရွေးဖို့အတွက် သူအဆင်သင့် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဝန်ခံထားခဲ့ပါတယ်"ဟု ၎င်းတို့ နှစ်ဦးက ကင်ညာ၏ NTV သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆီလ်ဗက်စတာက "ကျွန်တော်တို့ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးကို တစ်ယောက် လေးစားရပါမယ်။ ချစ်ချင်ခင်ခင်နဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အတူနေထိုင်ရပါမယ်။ ဒီသဘောတူညီမှုအတွက် ဘယ်သူကမှ ကျွန်တော်တို့ကို အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး"ဟုလည်း ဆက်လက် ပြောဆိုသွားသည်။
မုဆိုးမ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကလေးနှစ်ဦး မွေးဖွားထားသည်။ သူမ၏ ဆန္ဒအရ သတင်းများက အမျိုးသမီး၏ အမည်ကို ဖော်ပြမှု မပြုခဲ့ချေ။ ကင်ညာမိသားစုရေးရာ ဥပဒေ အကြံပေး ဂျူဒီသွန်ဂိုရီက ဥပဒေ သတ်မှတ်ချက်တွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို ခင်ပွန်းတစ်ဦးထက် အပြိုင်ယူထားရန် တိတိကျကျ တားမြစ်ထားမှု မရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒီကဏ္ဍကို ကင်ညာ ဥပဒေမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ထားတာ မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ သီးခြား သဘောတူညီမှုနဲ့ လက်ထပ်တဲ့ အခြေအနေအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ခုချိန်မှာ တကယ့်မေးခွန်းက ဒီအမျိုးသား နှစ်ယောက်ဟာ အမျိုးသမီးရဲ့ အပြိုင်ခင်ပွန်းလင် ဘဝကို ဘယ်လို အသားတကျ ဖြတ်သန်းမလဲ ဆိုတာပါပဲ"ဟု ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ကင်ညာတွင် ယောက်ျားတစ်ဦးက အမျိုးသမီးများကို အပြိုင်လက်ထပ်သည့် ကိစ္စမျိုးမှာ ရှားပါးသော အခြေအနေ မဟုတ်သော်လည်း အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ယောက်ျားနှစ်ဦးကို တစ်ပြိုင်တည်း လက်ထပ်ခြင်းသည် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မကြုံဖူးသည့် သတင်းမျိုး ဖြစ်လာကြောင်း သိရှိရသည်။
Jelly Bean User များအသိဆုံးဘာဘဲ။ထိုနည်းတူ
iOS မှာလဲ မြန်မာ Font ရဘို့က အဓိကဘာဘဲ။
အရေးကြီးဆုံးအချက်က မြန်မာစာ ရဘို့ဆိုတာကို Phone တစ်လုံးမဝယ်ခင် အစဉ်းစားသင့်ဆုံး ဘာဘဲ။
Brand Phone တွေမှာ Language ရွေးချယ် စရာထဲမှာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ဘာသာ fontအကုန်ပါပေမဲ့ မြန်မာစာဘဲမပါတာပါ။နောင်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ပါလာနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့
အခုဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကို သိစေချင်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်အောင် ပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြောချင်တာ Phone ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် အဓိက မြန်မာစာရမရ ရရင် စာတည့်မတည့်မေးပြီးဝယ်ပါ
ပြောသာပြောနေရတာ Jelly Bean မှာမတည့်ဘာဘူး။လူတွေက Brand အစွဲအလန်းကလဲရှိတော့
ဘာဝယ်ဘာလို့မပြောချင်ပေမဲ့ ခုလတ်တလောအဆင်ပြေတာကတော့ HTC ဘာဘဲ Built In မြန်မာစာ ပါတော့ ဘာမှကိုပြောစရာမလိုတာ။
ဖြစ်နေတာက နာမည်ကြီးဖုန်းတော့ကိုင်ပါရဲ့ မြန်မာစာက Root လုပ်မှ လုပ်တော့ကော စာတွေကမတည့်။iPhone 5တော့ကိုင်ဘာရဲ့ 6.1.4မှာ J B မရ မရတော့ ဘာဖြစ်လဲ facebook
သုံးချင်ရင် LikeBookရှိတယ်မိုးကုတ် Browser ရှိရင် မြန်မာစာ တွေ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ Like Bookက
တွေ့ရတာ China ဘတ်ဂျက် Ph တွေက မြန်မာစာ ဝေဝေဆာဆာပါဝင်ပြီး High End Ph တွေမှာ
မြန်မာစာမပါတာဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အားနည်းချက်သာဖြစ်ပြီး User များကို ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ငွေကြေး
နဲ့ အဆင်ပြေစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကိုရင်းပြီး userတွေရဲ့အချိန်တွေ မကုန်စေချင်လို့တင်ပြလိုက်ရ
တန်ဖိုးကြီးတဲ့ Handset ဝယ်ပြီးမှ Note လေး တည့်အောင်မှတ်လို့မရ Contact မှာ အဆင်ပြေ
Handset များစွာ လက်တွေ့သုံးပြီး အများအဆင်ပြေစေရန် အကြံပြုလိုက်ပါသည်။
အက်စ်အက်စ်အေ (ရွက်ဆစ်) အဖွဲ့ ဆက်ကြေး တာဝန်ခံအား ဖမ်းဆီးရမိ ……….
ရှမ်းပြည်နယ် ကျောက်မဲ မြို့နယ်အတွင်း တပ်မတော် စစ်ကြောင်းမှ နယ်မြေလုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်စဉ် သြဂုတ် ၂၇ရက် နံနက် ၁ဝနာရီ မိနစ် ၅ဝချိန်ခန့်က အက်စ်အက်စ်အေ (ရွက်ဆစ်)အဖွဲ့မှ ဆက်ကြေး တာဝန်ခံ စိုင်းစံမြ (ဘ) ဦးအားစိန်လာအား လမ်းလျှောက် စကားပြော စက်နှစ်လုံး၊ ဆက်ကြေး တောင်းခံသည့် စာရွက်စာတမ်းများ နှင့်အတူ စေတီ မြောက်ရွာ အနီး၌ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်
ရှမ်းပြည်နယ်၊ မူဆယ်မြို့၊ ကောင်းမှု တုံရပ်ကွက်နေ ဦးရှမ်း(ခ)ဦးအိုက်ထွန်း နှင့် မြောက်ရပ်ကွက်နေ ဦးကျော်မင်းလွင် တို့နှစ်ဦးသည် သြဂုတ် ၂၇ရက် ညနေ ၆နာရီ ၄၅မိနစ်ခန့်က ကြူကုတ်မှ ဈေးရောင်း၍ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် မူဆယ်သို့ ပြန်လာစဉ် ကြူကုတ်၊ ပန်ဆိုင်းမြို့နယ်ခွဲ၊ ကျင်စန်းကျော့ ကျေး ရွာ အနီး၌ အရပ်ဝတ် ဝတ်ဆင်ထားသူ နှစ်ဦးက လက်နက်ငယ်ဖြင့် ပစ်ခတ်၍ ဆိုင်ကယ်များအား မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခဲ့သဖြင့် ဦးရှမ်း(ခ) ဦးအိုက်ထွန်းမှာ လက်နက်ငယ် ထိမှန် သေဆုံး ခဲ့ပြီး ဦးကျော်မင်းလွင်၏ ယာဘက်ပေါင် လက်နက်ငယ်ကျည် ထိမှန်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တေးသီချင်း အခွေဝယ်ရန် အဆင် မပြေ၍ အင်တာနက် မှ Download ဆွဲခြင်းကို ပြောစရာ မရှိသော်လည်း ပိုက်ဆံ ရှိပြီး Download ဆွဲခြင်းမျိုး ကို စိတ် မကောင်းကြောင်း အဆိုတော် ဖော်ကာက ပြောသည်။
၁)အသက်ရှုလို့ ကောင်းလာပြီး ကျန်းမာရွှင်လန်းလာမယ်။
က) မိနစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းမှာကို Blood Pressure သွေးပေါင်ချိန်က ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
ခ) ၈ နာရီအတွင်းမှာ Nicotine နီကိုတင်းဓာတ်နဲ့ CO ကာဘွန်မိုနောက်ဆိုက် ဓာတ်တွေက တစ်ဝက်ကျသွားမယ်။ Oxygen အောက်စီဂျင်ကပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားမယ်။
ဂ) ၄၈ နာရီအတွင်းမှာ Nicotine နီကိုတင်း ဓာတ်တွေ ကိုယ်ထဲက ရှင်းသွားမယ်။
ဃ) ၇၂ နာရီအတွင်းမှာ အဆုတ်ပြွန်တွေ တောင့်တင်းတာလျော့သွားပြီး အသက်ရှူလို့ ကောင်းလာမယ်။
င) ၂ ပါတ်ကနေ ၁၂ ပါတ်ကြာရင် သွေားလှည့်ပတ်မှုက ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
စ) ၃၉ ပါတ်ကြာရင် Cough ချောင်းဆိုး၊ Wheeze ရင်ကြပ်တာတွေ ကောင်းလာပြီး အဆုပ်ရဲ့  ၁၀%ပိုကေင်းလာမယ်။
ဆ) ၅ နှစ်နေရင် ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ သူတွေထက် နှလုံးသွေးကြော ပိတ်တဲ့ နှုန်းက တစ်ဝက်ကျသွား လိမ့်မယ်။
ဇ) ၁၀ နှစ်နေရင် Lung Cancer အဆုပ်ကင်ဆာ ဖြစ်တဲ့နှုန်းက ဆက်သောက် သူတွေ ထက် ထက်ဝက်ကျသွားမယ်။
၂) သွေးလေလှည့်ပတ်တာ မကောင်းတဲ့ ရောဂါကြောင့် ခြေလက် ပုပ်တာ၊ ဖြတ်ရတာတွေ နည်းသွားမယ်။
၃) ကိုယ်နဲ့ အတူနေထိုင်တဲ့ သူတွေကို ဆေးလိပ်ပြာတွေ၊ မီးခိုးတွေကတစ်ဆင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေတာတွေကို နည်းသွားစေမယ်။ ဆေးလိပ်ပြာတွေ၊ မီးခိုး တွေထဲမှာ Arsenic အာဆင်းနစ်ဓာတ်၊ Benzene ဘင်ဇင်းဓာတ် နဲ့ Cyanide ဆိုင်ယာနုိုက်ဓာတ် တွေပါတယ်။ Arsenic အာဆင်းနစ်ဓာတ် နဲ့ Benzene ဘင်ဇင်းဓာတ် တွေက ကင်ဆာဖြစ်စေတတ်တယ်။
၄) ကိုယ့်ရဲ့  ရင်သွေးတွေ Bronchitis အဆုတ်ပြွန်ရောင်၊ Pneumonia အဆုတ် အအေးမိ၊ Asthma ပန်းနာရောဂါ၊ Meningitis ဦးဏှောက် အမှေးရောင် ရောဂါနဲ့ Ear Infection နားပြည်ယိုတာတွေ နည်းသွားစေမယ်။
၅) ကလေးလိုချင်တဲ့ သူတွေ ကလေးမြုံတာ နည်းသွားပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင် ရင်လည်း ရင်သွေးက ကျန်းမာမယ်။
၆) အဆုပ်ကင်ဆာ၊ နှလုံးနဲ့ အဆုပ်ရောဂါ တွေကြောင့်ဖြစ်မဲ့ မကျန်းမာမှု၊ သေဆုံးမှုတွေ နည်းသွားမယ်။
ရ) ငွေကြေးကုန်ကျတာ နည်းသွားမယ်။
ဂ) အသားအရည် စိုပြေလာပြီး သွားတွေလည်း ပိုလှလာမယ်။ ဆေးလိပ် သောက်တဲ့ သူတွေက ရုပ်ရင့်တယ်။
၉ ) လျှာက အရသာခံနိုင်တာ ပိုကောင်းလာလို့ အစားအသောက်တွေစားတာ ပိုပြီး အရသာရှိလာမယ်။
၁၀) ကိုယ်စီးတဲ့ကားနဲ့ မိမိအိမ် အနံ့အသက်တွေ ကောင်းလာပြီး မီးဘေး အန္တရာယ်ကလည်း နည်းသွားမယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်မြို့နယ် အမှတ်(၉) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်- အင်းစိန်လမ်း ပေါ်ရှိ ငါးထပ်တိုက် သုံးလွှာတွင် သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က အိပ်ခန်း အတွင်းရှိ ရွှေထည်နှင့်ငွေများ သိမ်းဆည်းထားသော မီးခံသေတ္တာတစ်လုံး ခိုးယူခံရကြောင်း အခန်းပိုင်ရှင် ဦးကျော်စိန်က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
"သော့သုံးလုံးကို ရွှေဖြတ်တဲ့ ကတ်ကြေး (Cutter) နဲ့ ဖြတ်ထားတဲ့ လက္ခဏာ တွေ့ရတယ်လို့ ရဲတွေက ပြောတယ်။ အဲဒီမီးခံသေတ္တာက ဝယ်တုန်းကတောင် လူလေးယောက်မ သယ်ရတယ်။ သူတို့တွေ သေတ္တာကို လှေကားကနေချပြီး ကားပေါ်တင်တာကို တချို့လူတွေ မြင်ကြပေမယ့် ခိုးခဲ့တာလို့ မထင်မိကြဘူးတဲ့" ဟု ဦးကျော်စိန်၏ သမီးဖြစ်သူကဆိုသည်။
မီးခံသေတ္တာကို လူသုံးဦးက ကားတစ်စီးပေါ်သို့ တင်နေသည်ကို မြေညီထပ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဖုန်းအရောင်း ဆိုင်၏ လုံခြုံရေးကင်မရာမှ မြင်တွေ့ရသော်လည်း မည်သူမည်ဝါများ ဖြစ်သည်ကို သဲကွဲစွာမသိရကြောင်း ဖုန်းအရောင်းဆိုင်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
တယ်လီဖုန်းအရောင်းဆိုင်၏ လုံခြုံရေးကင်မရာ မှတ်တမ်းများအရ မီးခံသေတ္တာ တင်ဆောင်သည့်ယာဉ်မှာ Probox အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး လူသုံးဦးအနက် တစ်ဦးမှာ တိုက်အနီးရှိ အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက် လုပ်ငန်းမှ လူငယ်တစ်ဦး ပါဝင်ကြောင်း၊ ၄င်းလူငယ်ကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးရာ ၄င်းကို အကူအညီတောင်းသဖြင့် အိမ်လှေကားမှ ဝိုင်းဝန်းကူညီ သယ်ဆောင်ပေးခဲ့ရာ မီးခံသေတ္တာ သယ်သူများက ၄င်းကို ၁၅၀၀ ကျပ်ပေးခဲ့သည်ဟု ရဲစခန်းတွင် ထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်း မီးခံသေတ္တာပိုင်ရှင် ဦးကျော်စိုးက ပြောကြားသည်။
"မသင်္ကာတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုတော့ ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒီရပ်ကွက်မှာ အရင်က ဒါမျိုးမဖြစ်ဖူးခဲ့ပါဘူး" ဟု အမှတ်(၉)ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
လက်ပံတောင်းဆန္ဒပြ ဒေါ်နော်အုန်းလှ ထောင်နှစ်နှစ်၊ မိတ္ထီလာ ဗလီမီးရှို့သူ ထောင်နှစ်နှစ်
မိတ္ထီလာအကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ်များအတွင်း မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သော ဗလီတစ်ခု
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေးအတွက် မုံရွာမြို့တွင် ခွင့်ပြုချက် မရဘဲ ဆန္ဒပြခဲ့သူ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးမှ ဒေါ်နော်အုန်းလှအား စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး မုံရွာမြို့နယ် တရာရုံးက သြဂုတ် ၂၉ ရက်တွင် အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ရာ လွန်ခဲ့သော မတ်လအတွင်းက မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူအကြမ်းဖက် မှုများ၌ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ကျူးလွန်ခဲ့ သူများအား အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်သာ ချမှတ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေး စနစ်မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာပင် ဖြစ်သည်။
ဒေါ်နော်အုန်းလှသည် မုံရွာမြို့တွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး၊ လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်း လုံးဝဖျက်သိမ်းရေး၊ လက်ပံတောင်းတောင် အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှထွန်း အလိုမရှိ၊ ပြည်သူကို ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်သောရဲများ အရေးယူပေးရေး စသည့် အချက်လေးချက်ဖြင့် ဆန္ဒပြခွင့်ရရန် ခွင့်ပြုမိန့် တောင်းခံခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက သြဂုတ် ၁၂ ရက်တွင် အဆိုပါ တောင်းဆိုမှုကို ပယ်ချခဲ့ကာ သြဂုတ် ၁၃ ရက်တွင် ဒေါ်နော်အုန်းလှနှင့် ဒေသခံ အမျိုးသမီးတစ်ဦး လက်ပံတောင်းတောင် ဒေသမှ မုံရွာမြို့ဘက်သို့ ကူးအလာတွင် ဒေါ်နော်အုန်းလှကို ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒေါ်နော်အုန်းလှနှင့်အဖွဲ့ အနေနှင့် မုံရွာမြို့အတွင်း ဆန္ဒပြ အော်ဟစ်ခြင်း၊ အလံပိုစတာ စသည်တို့ ကိုင်ဆောင်ခြင်း မရှိဘဲ လမ်းလျှောက်ရုံ သက်သက်ဖြင့်သာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်ဟု မျက်မြင်သက်သေဖြစ်သော မုံရွာမြို့ခံများက ဆိုကြသည်။ ဒေါ်နော်အုန်းလှအား မုံရွာမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးညွှန့်စိုးက တရားလိုအဖြစ် တိုင်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်ရဲစခန်းက မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂၅၊ စာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ပြစ်မှုကြီးအမှတ် ၉၅၅၃ ဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့ ပြီး သြဂုတ် ၂၇ ရက်တွင် စတင် စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ဆိုသည်မှာ ''မည်သူမဆို ဖော်ပြချက်ကိုဖြစ်စေ ကောလာဟလကို ဖြစ်စေ သတင်းကိုဖြစ်စေ ပြုရာတွင် သို့တည်းမဟုတ် ထုတ်ပြန် ကြေညာရာတွင် သို့တည်းမဟုတ် ဖြန့်ချိရာတွင် နိုင်ငံတော် အစိုးရကိုဖြစ်စေ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ရေးကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်သည့် ပြစ်မှုကို တစ်ဦးတစ်ယောက် သောသူက ကျူးလွန်ချင်လာအောင် အများပြည်သူကို သော်လည်းကောင်း၊ အများပြည်သူ၏ သီးခြားလူစုကိုသော် လည်းကောင်း ကြောက်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း တစ်ခုခုဖြစ်စေရန် အကြံရှိလျှင် သို့တည်းမဟုတ် ထိုသို့ ဖြစ်စေတန်ရာသည့် အကြောင်းရှိလျှင် သို့တည်းမဟုတ် လူအမျိုးအစား အချင်းချင်း ဖြစ်စေ လူမျိုးစု အချင်းချင်းဖြစ်စေ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ပြစ်မှုကျူးလွန်အောင် လှုံ့ဆော်ရန် အကြံရှိလျှင် သို့တည်းမဟုတ် အဆိုပါ လှုံ့ဆော်ခြင်းကို ဖြစ်စေတန်ရာသည့် အကြောင်းရှိလျှင် ထိုသူကို နှစ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ် တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း'' ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ပုဒ်မဖြစ်သည်။
မုံရွာမြို့နယ် ရဲစခန်းအတွင်းရှိ အချုပ်ခန်းအတွင်း၌ တွေ့မြင်ရသော ဒေါ်နော်အုန်းလှ
ဒေါ်နော်အုန်းလှ၏ အမှုကို သုံးသပ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ဥပဒေ၏ အမြင့်ဆုံး စီရင်ခွင့်ဖြစ်သော ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အခြားအမှု တစ်ခုဖြစ်သော မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆူပူအကြမ်းဖက် မှုများ၌ တရားခံ နှစ်ဦးကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၂၇ နှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၅၁ တို့ဖြင့် အမှု ဖွင့် တရားစွဲဆိုပြီး ပြစ်မှုတစ်ခုလျှင် အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်၊ ပြစ်မှုနှစ်ရပ်စလုံး အတွက် တစ်ပေါင်းတည်း ကျခံစေရန် စီရင်ချက် ချခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
''မည်သူမဆို ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုသော နေရာအဖြစ်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ နေအိမ်အဖြစ်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်းများ သိုလှောင် ထိန်းသိမ်းသော နေရာအဖြစ်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ သာမန်အားဖြင့် အသုံးပြုသော အဆောက်အအုံကို ဖျက်ဆီးရန် အကြံဖြင့်ဖြစ်စေ မိမိက ထိုသို့ ပျက်စီးစေမည် ဖြစ်တန်ရာသည်ကို သိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ မီးဖြင့် သို့တည်းမဟုတ် ပေါက်ကွဲတက်သော အရာဖြင့် အကျိုးဖျက်ဆီးမှုကို ကျူးလွန်လျှင် ထိုသူကို တစ်သက်တစ်ကျွန်း ဒဏ်ဖြစ်စေ ဆယ်နှစ်ထိ ထောင်ဒဏ် တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်ကြောင်း'' ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများ၌ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဆောက်အအုံကို ဖျက်ဆီးခဲ့သူ နှစ်ဦးအား အကျိုးဖျက်ဆီးမှု ပုဒ်မ ၄၂၇၊ အိမ်ကျော်နင်းမှု ပုဒ်မ ၄၅၁ တို့ဖြင့်သာ အရေးယူ ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ပုဒ်မ ၄၂၇ ၏ ပြဋ္ဌာန်းမှုမှာ ''မည်သူမဆို အကျိုးဖျက်ဆီးမှုကို ကျူးလွန်၍ ထိုသို့ ကျူးလွန်ခြင်းဖြင့် အဘိုးငွေ ငါးဆယ်အောက် မနည်း ပျက်စီးနစ်နာစေလျှင်၊ ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထိ ထောင်ဒဏ် တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်'' ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ အိမ်ကျော်နင်းမှု ပုဒ်မ ၄၅၁ တွင် ''မည်သူမဆို ထောင်ဒဏ်ထိုက်သည့် ပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ရန် အလို့ငှာ အိမ်ကျော်နင်းမှုကို ကျူးလွန်လျှင် ထိုသူကို နှစ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုး ချမှတ်ရမည့် အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ကျူးလွန်ရန် ကြံရွယ်သည့် ပြစ်မှုသည် ခိုးမှုဖြစ်ခဲ့သော် ထောင်ဒဏ်ကို ခုနစ်နှစ်တိုး၍ ချမှတ်နိုင်သည်'' ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
မိတ္ထီလာ အကြမ်းဖက်မှုအတွင်း ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများကို ဖျက်ဆီးခဲ့သူများအား စွဲဆိုထားသည့် ဥပဒေပုဒ်မအရ အမြင့်ဆုံး စီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသည့်အတိုင်း စီရင်ခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း ဗလီကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးသူ ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့် တောင်းခံထားသည့် မြို့နယ်သို့ လက်ပံတောင်းတောင် ဒေသခံများနှင့်အတူ လာရောက်ခဲ့သည့် ဒေါ်နော်အုန်းလှအပေါ် အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ဆိုသည့် စီရင်ချက်မှာကား...။
၁၀တန်းကျောင်းသားလေး အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်ခံရ၍ သေဆုံးမှု့ဖြစ်ပွား။
၂၂.၈.၂၀၁၂ ရက်နေ့ ည ၁ဝ နာရီခွဲ အချိန်တွင် စာကျက်ဝိုင်းမှ ပြန်လာသော အထက (၇) ကျောင်းသာ ခွန်အောင်ခမ်းဦး အသက်(၁၆) နှစ် ၊
အောင်သိန်းဦး (၁၆) နှစ် ၁၀ တန်းကျောင်းသား တို့သည် စာကျက်ဝိုင်းမှ ဆိုင်ကယ်နှင့်ပြန်လာစဉ် အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ဝိုင်းရိုက်ခဲ့ ကြပါသည်။ည ၁၁
နာရီ အချိန်တွင် လှည့်ကင်းမှ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး စပ်စံထွန်းဆေးရုံသို့ ဆေးကုသခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ၂၃.၈.၂၀၁၂ မနက် ၁၀ နာရီ အချိန်တွင်
မန်းဒလေး ဆေးရုံကြီးသို့ ဆက်လက်ဆေးကုသခံယူသော်လည်း ညနေ ၇ နာ၇ီ ၄၅ မိနစ် အချိန်တွင် ရိုက်နှက်မှု့ဒဏ်ရာ နှင့်
သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ လတ်တလော အချိန်တွင် တရာခံပာု ယူဆရသော လူ(၃)ဦး အား ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေပြီး ပုဒ်မ ၁၈၇ မှ ပုဒ်မ ၃၀၂
ဖြင့် အမှု့ဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း သိရပါသည်။ ယခု သေဆုံးမှု့နှင့်ပက်သက်ပြီး အမည်အဖေါ်လိုသူ ဆရာမ တစ်ဦးပြောကြားချက်အရ ယခုလို တောင်ကြီးတွင် အုပ်စုလိုက်ဝိုင်းရိုက်မှု့များ
ယခင်ကလည်း ခဏခဏ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသည်ပာုပြောပြပါသည်။ သေဆုံးသူ မိသားစုဘက်မှ အမှု့မှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် မျှော်လင့်လျှက်ရှိပြီး
နောက်နောင် ဒီလို အုပ်စုလိုက်ရိုက်နှက်မှု့ မဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း
ဦးပိန်တံတားပေါ်၌ ဧည့်သည်များကို နှောင့်ယှက်သူများအား အရေးယူ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရမြို့ နယ်အတွင်းရှိ ဦးပိန်တံတားပေါ် တွင် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့်သည်များ နှင့် ပြည်တွင်းမှ လာရောက် အနားယူ သူများကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေ ရန်
ပြုမူပြောဆိုနေသူနှစ်ဦးအား တာဝန်ရှိသူများက ယခုလ ၂၃ ရက်နေ့ က အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။
"အခုလို အရေးယူဆောင်ရွက်ရတာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါပဲ။ ဧည့်သည်တွေကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် ပြု မူပြောဆိုနေတဲ့ အတွက် ထိန်း သိမ်းပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းကို လွှဲ ပြောင်းပေးသွားမှာပါ။ ဧပြီလ ၁ ရက် နေ့ကတည်းက တာဝန်ကျပြီး နိုင်ငံ ခြားဧည့်သည်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ ကို ဆောင်ရွက်ပေးနေတာပါ" ဟု ဦးပိန် တံတားတွင် နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် များစောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်ကျသူ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ထူးထူးအောင်က မြန်မာတိုင်း(မ်)ကို ပြောသည်။
ဦးပိန်တံတားတွင် နိုင်ငံခြားသားဧည်သည်များ စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ရဲအရာရှိနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦး ထိထားရှိပြီး နေ့စဉ် နံနက်ပိုင်းမှ ညပိုင်း အထိ တာဝန်ယူထားရကြောင်း သိရ သည်။
"ကျွန်တော်တို့က အေးအေးဆေး ဆေးပဲ လာအနားယူကြတာပါ။ ဘေး နားလေးကနေ ကပ်ပြီးတော့ ဘာတွေပြောနေလဲမသိဘူး။ အင်္ဂလိပ်လိုတွေ ဟုတ်တာတွေရော၊မဟုတ်တာတွေရော လျှောက်ပြောနေတာ။နောက်က နေလိုက်ပြီးတော့လည်း နှောင့်ယှက်တယ်။ အနီးနားက တာဝန်ကျရဲတွေ ကို အကြောင်းကြားပြီး ပြောလိုက်လို့ အခုလို အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားတာ ပါ"ဟု ဦးပိန်တံတားပေါ်တွင် စိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခံရသူ ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိ ကျောင်းသား တစ်ဦးကပြောသည်။
မန္တလေးမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသော နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များသည် ဦးပိန် တံတားသို့ မဖြစ်မနေလာရောက် အနားယူကြပြီး နေ၀င်ဆည်းဆာ အလှ များကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်လည်း အပါ အ၀င်ဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ ၀ါဆို၊ ၀ါခေါင်လများတွင် ဦးပိန်တံတားတည် ရှိရာ တောင်သမန်အင်းမှာ ရေများ တိုးလာသည့်အတွက် ပြည်တွင်းဧည့် သည်များပင် လာရောက် အပန်းဖြေအနားယူကြသည့်အတွက်
မိုင်လီဆိုင်းရပ်(စ်) ၏ သရုပ်ပျက် ဖျော်ဖြေမှု များမှာ စိတ်ပျက်ဖွယ် ကောင်းကြောင်း ဘရွတ်ရှီး ဆို
သြဂုတ် ၂၅ ရက်က ကျင်းပခဲ့သည့် MTV Music Award ဆုပေးပွဲ ၌ မိုင်လီ ဆိုင်းရပ်(စ်)၏ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုကို အံ့သြ တုန်လှုပ်ရသူများထဲ ၌ ဟောလီးဝုဒ် မင်းသမီး ဘရွတ်ရှီး လည်း ပါဝင်သည်။
Hannah Montana ဇာတ်ကား၌ ဇာတ်ဆောင်၏ မိခင်နေရာမှ သရုပ်ဆောင်သူ ဘရွတ်ရှီးသည် မိုင်လီ၏ အဝတ်ဗလာနီးပါး သရုပ်ပျက် ဖျော်ဖြေမှုများကို ကြည့်ရှု ရသည်မှာ စိတ်ပျက်ဖွယ် ကောင်းကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
”ဒီလို ဖျော်ဖြေဖို့ သူ့ကို ဘယ်သူများ အကြံပေးလိုက်လဲ မသိပါဘူး။ အဲဒီ လောက်ထိ လုပ်ဖို့ လိုအပ်လို့လား။ လေဒီ ဂါဂါကို လိုက်တုနေသလားပဲ။ ဂါဂါက တော့ ဒီလို ဖျော်ဖြေမှုတွေမှာ ဆရာကြီး လေ”ဟု ဘရွတ်ရှီး က ပြောကြားသည်။
၄င်းဆုပေးပွဲ၌ မိုင်လီ၏ ဖျော်ဖြေ မှုများမှာ ဂါဂါ၏ ရူးသွပ်မှု ပုံစံလမ်း ကြောင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း အများက လက် ခံထားကြသည်။
”ဒီလို ပုံစံ ဖျော်ဖြေဖို့ မလိုအပ်ပါ ဘူး။ ကသိ ကအောက်နိုင်တယ်။ နောက် ပြီး လျှာပြီး ထုတ်ထုတ်ပြတယ်။ ထင် ရာစိုင်းပြီး လျှောက်လုပ်တယ်လို့ ထင် ပါတယ်”ဟု ၄င်းက ထပ်လောင်း ဆို သည်။
Ref: E! Online
အမျိုးသမီး ညအိပ်ဝတ်စုံနှင့် ပူတင်၏ပုံ ပန်းချီကားကို ပြသခွင့် ပိတ်ပင်
သမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင်၏ ပုံတူကို အမျိုးသမီး ညအိပ် ဝတ်စုံနှင့် တွဲဖက်၍ ရေးဆွဲထားသည့် ပန်းချီကား တစ်ချပ်ကို ပြခန်းတစ်ခုအတွင်း ပြသထားရာမှ ရုရှားရဲတပ်ဖွဲ့က ဖယ်ရှားစေခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ စိန့်ပီတာစဘာ့ဂ်မြို့ရှိ ပြခန်းထဲတွင် ပြသထားသော အဆိုပါ ပန်းချီကားကို ရဲများက ဆက်လက် ပြသခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဟု သတင်းများက ဆိုသည်။ အဆိုပါ ပန်းချီကားထဲတွင် အမျိုးသမီး ညအိပ် အတွင်းခံ အဝတ်အထည်များ ဝတ်ဆင်ထားသည့် ပူတင်သည် ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူ ဒီမီထရီ မက်ဗီဒက်ဗ်ကို ဆံပင်ဖြီးပေးနေသည့်ဟန် ပုံဖော်ရေးဆွဲထားသည်။ ထို့အပြင် အငြင်းပွားလောက်စရာ Gayဆန့်ကျင်ရေး ဥပဒေများအတွက် ဦးဆောင် စည်းရုံးခဲ့သည့် ရုရှား ကွန်ဆာဗေးတစ် နိုင်ငံရေးသမား အချို့ကို သရော်ရေးဆွဲထားသည့် အခြားပန်းချီကား နှစ်ချပ်ကိုပါ ရဲများက သိမ်းယူခဲ့သည်။
စတုတ္ထ ပန်းချီကားတွင်မူ ရုရှား အော်သိုဒေါ့စ် ဘုရားကျောင်းတော် အကြီးအကဲ၏ ပုံကို ဆေးမင်ကြောင်များ ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပြီး ယင်းကိုလည်း အာဏာပိုင်များက တိတိကျကျ မဖော်ပြသည့် အကြောင်းပြချက်များဖြင့် ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပန်းချီပြခန်းပိုင်ရှင် အလက်ဇန္ဒား ဒွန်စကွိုင်းက ယင်းပိတ်ပင်မှု မတိုင်မီ မိမိကို မည်သည့် အကြောင်းကြားမှုမျှ မပြုလုပ်ခဲ့သလို အကြိုဝရမ်း အသိပေးချက်မျိုး မရှိခဲ့ကြောင်း ဝေဖန် ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဖယ်ရှားခံရသည့် စာရင်းတွင် အာကန်ဂီလက်ခ်မြို့သား ပန်းချီဆရာ ရေးဆွဲပြီး အုပ်စိုးသူများဟု အမည်ပေးထားသည့် ပန်းချီကားလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ပူတင်၏ သရုပ်ဖော်ပုံတွင် သမ္မတသည် ညဝတ် အမျိုးသမီး အတွင်းခံ ဝတ်စုံနှင့် ရှိနေပြီး မက်ဗီဒက်ဗ်၏ နောက်ဘက်တွင် ရပ်ကာ ဆံပင်ကို ဖြီးသင်ပေးနေသည့်ဟန် ရေးဆွဲထားသည်။ ဝန်ကြီးချုပ် မက်ဗီဒက်ဗ်သည်လည်း အမျိုးသမီး အတွင်းခံ အဝတ်အထည်များ ဝတ်ထားသည့် အမျိုးသမီး ခန္ဓာကိုယ်မျိုး တပ်ဆင်ခြင်း ခံထားရကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြသွားသည်။
တကယ်ရမှာပါ။ Skype မှ Developer များ တီထွင်အောင်မြင်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ နည်းပညာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း နည်းပညာ အရ Skype နေ 3D Video Call ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြေင်း သိရပါတယ်။
ဒီအတွက် နည်းပညာသစ်ကြိုးစားဖန်တီးထားတာပါ။ နေရာဒသတိုင်းမှာ ရရှိဖို့တော့ မသေချာ သေးပါဘူး။ စမ်းသပ်မှုအနေနဲ့ အမေရိကန်မှာ စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃ ဘက်မြင် ရုပ်ကြွ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို Server မှတစ်ဆင့် တစ်ဖက်မှ တစ်ဖက်သို့ပေးပို့တာအဆင်ပြေပေမယ့် မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ပေါ်လာဖို့ကျတော့ ဘယ်လို နည်းပညာ အသုံးပြုထား သလဲ မသိသေးပါဘူး။ 3D ဆိုတော့ မျက်မှန်တပ်ပြီးချက်ရမှာလား သို့မဟုတ် သူ့ပါသူ Ramdering ဖြစ်နေပြီး ရုပ်ကြွနေမလားဆိုတာ ခန့်မှန်းစဉ်းစားစရာ ပါ။ ၂ ဖက်စလုံးက မျက်မှန် ကာလာတွေနဲ့ ဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဘာရောင်မှ မပါတဲ့ 3D မျက်မှန်ဖြူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီတော့ မျက်မှန်တပ်ပြီးချက်ချင်သူ ချက်လို့ရမယ်။ မဟုတ်လည်း 2D ဗားရှင်း ပဲ ချက်မယ် အစရှိသဖြင့် Option ရွေးလို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။ Skype မှ ဖန်တီးထားတဲ့ 3D Video Call စနစ်ကို မကြာမီ မိတ်ဆက် ပြသ သွားဖို့ ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ကောလိပ် ကျောင်းသူ တစ်ဦးသည် သူမ အသုံးပြုပြီးသား အတွင်းခံများကို စင်္ကာပူ ၄၅ ဒေါ်လာ (၁၀၄ ရင်းဂစ်) ဖြင့် ရောင်းချနေကြောင်း စင်ချုးနေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
အတွင်းခံဘောင်းဘီ (၂) ထည် ၀ယ်ယူသူအတွက် အပိုဆု အဖြစ် အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးမှ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအား ချွတ်ပြသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်အား အခမဲ့ကြည့်ရမည်ဖြစ်ပြီး သူမ၏ မျက်နှာကို မူ ပြသထားခြင်း မရှိပေ။
Felicia ဆိုသူ ကျောင်းသူသည် သူမ၏ ဘလော့(ဂ်)မှတဆင့် ယခုကဲ့သို့ လိင်စိတ်နိုးကြွစေသည့် အတွင်းခံ ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်မှာ တစ်လခန့် ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ပထမပိုင်းတွင် ဘောင်းဘီတစ်ထည်လျှင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀ ဖြင့် ရောင်းခဲ့ပြီး ယခုလမှ စတင်ကာ ဈေးနှုန်းမြှင့်တင် ရောင်းချခဲ့ကာ စုစုပေါင်း အတွင်း ခံ (၁၆) ထည် ရောင်းထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
သူမနှင့် အင်တာဗျူးလုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းမှုများကိုလည်း ငြင်း ဆိုခဲ့ပြီး အခမဲ့ ကြည့်ရှုခွင့်ပေးသည့် ဗီဒီယိုဖိုင် ကိုလည်း ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။
သူမသည် ဘောင်းဘီများကို မရောင်းချခင် ၁၂ နာရီကြာ ၀တ်ဆင်ခဲ့ သည်ဟု သိရပြီး ယခုကဲ့သို့ စွန့်စားလုပ် ကိုင်ရခြင်းမှာ ကျောင်းလခ ပေးရန် အတွက် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
သူမက "ကျွန်မ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မသိစေချင်ပါဘူး" ဟုလည်း ပြောဆို ထားခဲ့သည်။